လရညျတှေ ဒလဟော သူ့ရဲ့လီးကို အသမေကျမော – My Blog
လရညျတှေ ဒလဟော သူ့ရဲ့လီးကို အသမေကျမော
ခွံဝနျးကယျြကွီးတဈခု၊ နှဈဧကခနျ့ ကယျြဝနျးသညျ။ ထိုခွံဝနျးကယျြကွီးအတှငျးရှိ တဈထပျတိုကျလေးက စိမျးပွာ ရောငျဆေးသုတျထားသညျ။ တဈထပျတိုကျဆိုပမေယျ့ ခပျသေးသေးတော့မဟုတျပါ။အဆောကျအဦးပမာဏပငျ ပေ(၅၀) ပတျလညျလောကျရှိသညျ။ တဈထပျတိုကျလေး၏ နောကျမီးဖိုခြောငျနှငျ့ တညျ့တညျ့လောကျရှိ တိုကျလေး၏ ဘေးဖကျနား တှငျ ရစေငျတဈခုရှိပွီး ထိုရစေငျ၏ရှေ့ အိမျရှဘေ့ကျနားတှငျတော့ ကားဂိုဒေါငျလေးတဈခုရှိလေ သညျ။ တဖနျတိုကျလေး၏ နောကျဖကျခွံဝနျး၏ ဒေါငျ့လောကျတှငျ ဂိုဒေါငျလိုလို သဈသားအိမျလေးတဈလုံးရှိလသေညျ။ ခွံဝနျးကယျြကွီးထဲတှငျတော့ သီးပငျ၊ စားပငျ၊ အပငျကွီးမြား၊ အရိပျရ အပငျကွီးမြားအပွငျ အိမျရှဖေ့ကျတှငျတော့ ပနျးအလှမြား စိုကျပြိုးလကျြ ခုံတနျးလြား လေးမြားနှငျ့အတူ ပနျးခွံ လေးသဖှယျ ပွုလုပျထားလသေညျ။
အခြိနျက ည(၁၀)နာရီကြျောပွီဖွဈသညျ။ ခွံဝနျးထဲရှိ ပနျးခွံလေးထဲတှငျ လူတဈယောကျ ထိုငျနပွေီး လကျထဲမှ စီးကရကျကို ဖှာ၍ တစုံတရာကို စဉျးစား တှေးတော၍နသေညျ။ ထိုသူကတော့ ဤခွံဝနျးနှငျ့ တိုကျတို့၏ ပိုငျရှငျ သူဌေးကွီး ဦးကငျြမောငျ၏ လူယုံတပညျ့ရငျးလညျးဖွဈ သူဌေးကွီးနှငျ့ သူဌေးကွီး ကတျော သန်တာလတျတို့၏ ဒရိုကျဘာလညျးဖွဈသညျ့ အသကျ(၃၅)နှဈလောကျရှိသညျ့ ညှနျ့မောငျဆိုသော လူတဈယောကျဖွဈလသေညျ။ ညှနျ့မောငျတဈ ယောကျ စီးကရကျဖှာ ရငျး မမလေး(သန်တာလတျ)၏ အကွောငျးကို စဉျးစား၍နသေညျ။ သန်တာလတျမှာအသကျ(၃၀)ပငျမပွညျ့တတျသေးသျောလညျး အသကျ(၆၀)အရှယျ ဦးကငျြမောငျကို လကျထပျခဲ့ သညျ။ သန်တာလတျမှာ အပွဈပွောစရာမရှိလောကျအောငျ ခြောမောလှပသူလေးဖွဈသညျ။ ယခု သဌေး ကွီးဦးကငျြမောငျ ခရီး ထှကျသှားခိုကျတှငျ သန်တာလတျမှာ ညှနျ့မောငျကို ရလောမွောငျးပေးတှေ လုပျနသေညျ။ သူမ၏ ဝတျလဈစလဈကိုယျလုံးကို ပငျ ညှနျ့ မောငျမွငျဖူးခဲ့ရပွီဖွဈသညျ။ ဒါပမေယျ့ သူမအား ညှနျ့မောငျ ရှောငျခဲ့ပါသညျ။ ကိုယျထိလကျရောကျ မကြူးလှနျခဲ့ပါ။ ဒါကလညျး သူတို့နှဈယောကျကွားတှငျ ခွားထားသော တံတိုငျးက ထူထဲကွီးမားလှသညျ။ ညှနျ့မောငျ အသကျ(၂၀)ပတျဝနျး ကငျြအရှယျထဲက ဦးကငျြမောငျထံ ရောကျခဲ့ရတာဖွဈသညျ။
မိဘညီအဈကိုမောငျနှမ မရှိတော့သညျ့ တဈကောငျကွှကျ ညှနျ့မောငျအား သူဌေးကွီး ဦးကငျြမောငျက ဒရိုကျဘာတဈယောကျအနမြေိုးသာမက တူသား သဖှယျ ပွုစုစောငျ့ရှောကျထား ခဲ့တာဖွဈသညျ။ ဒီတော့ ညှနျ့မောငျတဈယောကျ ဦးကငျြမောငျ၏ မကျြနှာကို ထောကျထားရသညျ။ နှဈပေါငျးမြားစှာအတူနေ လာတော့လညျး ညှနျ့မောငျစိတျထဲ ဦးကငျြမောငျကို မိဘသဖှယျကိုးစားခငျတှယျနမေိသညျဖွဈတော့ သူ့အနနှေငျ့ ဘယျလိုပဲ သန်တာလတျ၏ အပျေါ သဘောထားပါစေ ကိုယျထိလကျရောကျမှု မဖွဈအောငျတော့ ညှနျ့မောငျမှာ အတျောကွီး စိတျကိုတငျး လကျြ ရှောငျရှားနခေဲ့ရလသေညျ။ တကယျတော့ မမလေး(သန်တာလတျ) ကိုယျတိုငျကလညျး ဆငျခွငျဖို့ ကောငျးလသေညျ။ ဖအနှေငျ့ သမီးအရှယျမြှပငျ မက အသကျကှာခွားသညျ့ သူကိုယူထားတော့လညျး သူမကို ကာမမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ ကနြေပျနှဈသိမျ့မှုရအောငျ ဘယျစှမျး ဆောငျပေးနိုငျပါ့မလဲဟု ညှနျ့မောငျ တှေးမိသညျ။ သူဌေးကွီး ဦးကငျြမောငျမှာ ငှပေေါ သူတဈယောကျမို့ အခုမှမဟုတျ၊ ဟိုအ ရငျထဲက မိနျးမကိစ်စ ရှုပျပှခေဲ့တာဖွဈသညျ။ လုပျငနျးသဘောအရ ဦးကငျြမောငျမှာမကွာခဏခရီးထှကျရတတျပွီး ခရီးထှကျ ရာမှ ပွနျလာလြှငျလညျး တဈရကျမြှသာအိမျတှငျအောငျးနသေညျ။ နောကျနတှေ့တှေငျ နိုကျကလပျမြားဆီသို့ ဦးကငျြမောငျ အား ညှနျ့မောငျက လိုကျပို့ပေးနကွေဖွဈလသေညျ။
ဒီတော့လညျး သန်တာလတျမှာ ဆန်ဒတှေ ဘယျလိုလုပျပွညျ့ဝနိုငျပါတော့မ လဲဟု တှေးရငျး ညှနျ့မောငျ သကျပွငျးတဈခကျြခလြိုကျသညျ။ ပွီးတော့လကျထဲမှ အစီခံနားရောကျနပွေီဖွဈသော စီးကရကျ ကို လကျညှိုးဖွငျ့ တောကျထုတျလိုကျပွီး လကျပတျနာရီကို ကွညျ့လိုကျသညျ။ ည(၁၁)နာရီရှိပွီဖွဈသညျ။ ထိုငျ နရောမှ ညှနျ့မောငျ မတျတပျထ၍ ရပျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ အိမျထဲသို့ ပွနျဝငျရနျ အိမျဘေးဖကျမှ ပတျ၍ နောကျဖေးဘကျသို့ လြှောကျလာခဲ့သညျ။သူစပွီး အိမျထဲကထှကျလာကတညျးကမီးဖိုခြောငျဘေးတံခါးကထှကျလာခဲ့တာ ဖွဈပွီး ယခုလညျး သူပွနျစထေ့ားခဲ့သော မီးဖိုခြောငျတံခါးမှပငျ ပွနျ၍ ဝငျရမညျ ဖွဈသညျ။ တံခါးရှသေို့အရောကျ စထေ့ား သောတံခါးကို တှနျးဖှငျ့မညျအလုပျ ညှနျ့မောငျ၏ အကွညျ့က အိမျဘေးဖကျသို့ ရောကျ၍သှားသညျ။ ဟာ…ဘာ လဲ မသိဘူး….ကားဂိုဒေါငျနှငျ့တိုကျနံဘေးကွားသန်တာလတျ၏ အိပျခနျးပွတငျးပေါကျဘေးတှငျ မာလီကုလား အီစှတျမှာ နံရံကိုကပျ ၍ ငုတျတုတျထိုငျလိုကျ သညျကို ညှနျ့မောငျ တှလေို့ကျရသညျ။ ညှနျ့မောငျတံခါးရှမှေ့ခှာ၍ နောကျသို့ဆုတျကာ အနီးရှိ ပနျးရုံ အကှယျမှနေ၍ ကွညျ့နလေိုကျသညျ။ အီစှတျက ငုတျတုတျလဲထိုငျခပြွီးရောသူ့လကျတဈဖကျကို အပျေါသို့မွှောကျ၍ သူ၏ ခေါငျးပျေါသို့ရောကျနသေော ပွတငျးပေါကျမှနျတံခါးကို လကျညှိုးထိပျလေးဖွငျ့ သုံးလေးခကျြမြှ ခေါကျလိုကျသညျ။ အခနျးထဲ တှငျ မီးခြောငျးဖှငျ့ထားသညျ။ ထိုပွတငျးပေါကျမှာ သူဌေးကွီးဦးကငျြမောငျနှငျ့ သန်တာလတျတို့ အိပျသညျ့ ကု တငျကွီး၏ ခေါငျး ရငျးဘေးဖကျတှငျ ရှိလသေညျ။
အီစှတျက မှနျတံခါးကို ခေါကျလိုကျသျောလညျး ဘာမှ ထူးခွားလာမှုကို မတှရေ့ပေ။ ခဏမြှ ကွာတော့ အီစှတျက မှနျတံခါးကို လကျတဈဖကျမွှောကျ၍ ခေါကျပွနျသညျ။ ဒီတဈခါတော့ လေးငါးခကျြလောကျ ခေါကျ လိုကျသညျကို တှလေို့ကျရသညျ။ တအောငျ့မြှကွာတော့ မှနျပွတငျးပေါကျအတှငျးဖကျမှ ကာ ထားသော လိုကျကာစလေး ဘေးသို့ ရှသှေ့ားပွီး သန်တာလတျ၏ မကျြနှာ မှနျတံခါးအတှငျးမှ ပျေါလာသညျ။ သန်တာလတျက ပွတငျးပေါကျရှအေ့ောကျဖကျ သို့ ကွညျ့လိုကျသညျ။ အီစှတျကိုတှလြေှ့ငျ ခဏနရေနျ လကျကာပွပွီး မှနျပွတငျးတံခါးအတှငျးမှ သန်တာလတျ မကျြနှာက ပြောကျကှယျသှားသညျ။ ခဏအ ကွာ ပွတငျးပေါကျမှနျတံခါးက ပှငျ့၍သှားသညျ။ သန်တာလတျက တံခါးရှကျမြားကို ဖောကျ ခြိတျမြား ခြိတျ၍ အသအေခြာဖှငျ့လိုကျသညျ။ အီစှတျ ငုတျတုတျထိုငျနရောမှ ထရပျလိုကျသညျ။ သန်တာလတျ၏ လကျတဈဖကျ အပွငျသို့ထှကျလာပွီးငါးရာတနျတဈရှကျလှမျးပေးလိုကျသညျကို တှလေို့ကျရ သညျ။ အီစှတျက ငါးရာတနျကို လှမျးယူလိုကျပွီး သန်တာလတျကို ဆလံပေးလိုကျ သညျ။ သန်တာလတျက အီစှတျကို ပွုံးပွလိုကျပွီး ပွတငျးပေါကျမှ ပြောကျ ကှယျ၍ သှားသညျ။ ထိုအခါတှငျ အီစှတျက သူ၏ နောကျနားရှိ ကားဂိုဒေါငျဘေးသို့ ပုနျးလြှိုးကှယျလြှိုးဖွငျ့ လြှောကျလာပွီး ခှေးခွအေရှယျ သဈသားခုံ တဈလုံးကို ယူလာသညျ။ ပွီးတော့ ဖှငျ့ထားသော ပွတငျးပေါကျဆီသို့ လြှောကျလာပွီး ပွတငျးပေါကျရှတှေ့ငျ သဈသားခုံကို ခလြိုကျသညျ။
ပွီးတော့ သူ ၏ ကိုယျပျေါမှ အဝတျအစားတှအေားလုံးကို ခြှတျလိုကျသညျ။ ဝတျလဈစလဈဖွဈသှားသော အီစှတျ၏ ကိုယျလုံးကွီးက မဲ မှောငျ၍နသေညျ။ အလုပျကွမျးသမားပီပီ တဈကိုယျလုံး ခိုငျမာတောငျ့တငျးကာ ကွှကျသားတှကေ သူ့နရောနှငျ့သူ အဖုအ ထဈတှေ ကွှ၍နသေညျ။ ကွီးမားတုတျခိုငျသော သူ၏လီးတနျကွီးက တောငျမတျ၍ နသေညျ။ ဝတျလဈစလဈဖွဈသှားသညျ နှငျ့ အီစှတျက သဈသားခုံလေးပျေါတကျ၍ ရပျလိုကျသညျ။ ထိုအခါ ပွတငျးပေါကျနှငျ့ သူ၏ကိုယျလုံးမှာ အံကိုကျဖွဈ၍နေ သညျ။ အီစှတျက ပွတငျးပေါကျဖကျသို့ လှညျ့ကာ တစောငျမကတြကလြေး ရပျလိုကျသညျ။ သူ့ မကျြလုံးတှကေ ပွတငျး ပေါကျဝမှနေ၍ အခနျးတှငျးသို့ ကွညျ့ရငျး သူ၏ ကွီးမားတုတျခိုငျလှသော လီးကွီးက ပို၍ တငျးပွောငျတောငျမတျလာသညျ။ ညှ နျ့မောငျ သသေခြောခြာကွညျ့မိသညျ။ အီစှတျ သူ့လီးကို ဆီတဈမြိုးမြိုး သုတျလိမျးလာမှနျး သိသာလှသညျ။ လီး ကွီးမှာ မဲနကျ၍ အခနျးတှငျးမှ မီးခြောငျး အလငျးရောငျနှငျ့ ပွောငျလကျ၍နသေညျ။ အီစှတျမကျြလုံးတှကေ အခနျးတှငျးသို့ တ စိုကျမတျမတျကွညျ့၍နသေညျ။ အိပျခနျးတှငျးတှငျရှိသညျ့ သန်တာလတျ ကို ညှနျ့မောငျ မမွငျရခြေ။ သန်တာလတျ ဘယျလိုရှိသညျ ကို သူသိခငျြလာသညျ။ ပွတငျးပေါကျရှသေို့ မသှားဘဲ အခနျးထဲသို့ မွငျနိုငျမညျ့နညျးလမျးကို သူ စဉျးစားမိလိုကျသညျ။ သူ ရောကျနရော အရှဖေ့ကျနားရှိ ရစေငျပျေါသို့ တကျသညျ့လှကေားအတိုငျး ညှနျ့မောငျ တကျလာခဲ့သညျ။ ရစေငျပျေါထိ မ တကျ တော့ဘဲ လှကေားတဝကျလောကျတှငျ ညှနျ့မောငျ ရပျလိုကျသညျ။ မွငျရပါပွီ။ အိပျခနျးထဲမှ သန်တာလတျကို မွငျလိုကျရ ပါပွီ။
သန်တာလတျက ခွရေငျးဖကျရှိ ကုတငျတိုငျတဈခုကို ခေါငျးအုံးတဈလုံးအလြားလိုကျ ကပျထောငျ၍ ကိုယျကို ခပျလြှော လြှောလေးမှီကာ အိပျယာပျေါတှငျ အီ စှတျဖကျသို့လှညျ့၍ ထိုငျနသေညျ။သန်တာလတျမှာ ဝတျလဈစလဈ ခြှတျမထားပမေယျ့ အောကျပိုငျးတှငျ ထဘီမရှိဘဲ အပျေါပိုငျးတှငျ ဝတျထားသော ရငျ စေ့ အကငြ်္ီလေး၏ ရငျဘတျရှိ အကငြ်္ီကွယျသီးတှကေို ဖွုတျထားကာ နို့အုံနှဈလုံးက အထငျးသားပျေါထှကျ၍နသေညျ။ ခပျ လြှောလြှောမှီ၍ ထိုငျရငျး ဒူးနှဈ လုံးကို ထောငျကာ ပေါငျနှဈခြောငျးကို ဖွဲကားထားပွီး သူမ၏ လကျတဈဖကျက ပေါငျကွားထဲ တှငျရှိ၍နသေညျ။ ပွီးတော့ သူမလကျက တလှုပျလှုပျဖွဈ နသေဖွငျ့ ညှနျ့မောငျ သခြောကွညျ့လိုကျသညျ။ ညှနျ့မောငျ သိ လိုကျပါပွီ။ သန်တာလတျ၏ ပေါငျကွားထဲမှ လကျကကိုငျထားတာက ရာဘာလီးအတု ဖွဈသညျ။ သူမ၏ စောကျခေါငျးထဲသို့ ထညျ့ကာ သှငျးလိုကျထုတျလိုကျ လုပျနသေညျ။ သူမ၏ မကျြလုံးတှကေ အီစှတျကို စိုကျ၍ကွညျ့နသေညျ။ အထူးသဖွငျ့ အီ စှတျ၏ တောငျမတျတငျးပွောငျနသေော ကွီးမားတုတျခိုငျလှသညျ့လီးကွီးကိုဖွဈသညျ။စောကျပတျထဲသို့ ရာဘာလီးအတုကို ထုတျလိုကျ သှငျးလိုကျ လုပျပေးနရေငျး ကနျြသော သူမ၏ လကျတဈဖကျကလညျး ဟငျးလငျးပျေါနသေော သူမ၏ နို့အုံနှဈ လုံးကို တဈလုံးပွီး တဈလုံး ဆုတျခြေ၍ပေး နသေညျ။ နို့သီးလေးတှကေိုလညျး သူမဘာသာ လကျညှိုးလကျမတို့ဖွငျ့ ညှပျညှပျ ပွီး ပှတျလှညျ့ပေးသညျ။
သန်တာလတျ၏ မကျြနှာလေးတှငျ ခြှေးစေးလေးတှေ ပြံ၍နသေညျ။ မကျြနှာလေးတဈခုလုံး နီမွနျးကာ ရာဂစိတျတှေ ထကွှနသေော သူမ၏ မကျြနှာလေးမှာ အိုလကျြ ငိုခငျြသလို မဲ့တဲ့တဲ့လေး ဖွဈနပေုံမှာ သူမ၏ မကျြနှာလေးကို သသေခြော ခြာကွညျ့လိုကျရသညျနှငျ့ ညှနျ့မောငျ၏ တောငျမတျနပွေီဖွဈသော လီး တနျကွီးမှာ တငျးကနဲ တငျးကနဲ ဖွဈဖွဈသှားရလေ သညျ။ အီစှတျကလညျး မတျတပျရပျလကျြက တောငျမတျတငျးပွောငျနသေော သူ၏ ကွီးမားတုတျခိုငျ လှသညျ့ လီးမဲမဲကွီးကို တငေါကျငေါကျဖွဈအောငျ လုပျပွလိုကျ လကျညှိုးလကျမနှငျ့ ညှပျ၍ လီးကို အရငျးထိ ဖွဲပွလိုကျဖွငျ့ လုပျပွသညျ။ ထိုအခါမြိုး တှငျ သန်တာလတျမှာ နောကျသို့မှီထားသောသူမ၏ဦးခေါငျးလေးကို ရှသေို့ ဟပျကနဲ ကွှလိုကျပွီး နှုတျခမျးလေးဟလကျြ မကျြ တောငျမခတျ လီးကွီးကို စိုကျ ကွညျ့ကာ လကျတဈဖွငျ့ ကိုငျထားသော ရာဘာလီးကို ခပျသှကျသှကျကွီး ဆောငျ့လိုးပဈလိုကျ လသေညျ။လကျတဈဖကျနှငျ့နို့တှကေိုနယျရငျး ရာဘာလီးတု ကို ကိုငျထားသော လကျက ခပျသှကျသှကျကွီး ဆောငျ့ဆောငျ့ လိုးနသေညျ။ သန်တာလတျ၏ မကျြလုံးတှကေ တခကျြတခကျြ စငျးစငျးကသြှားသညျ။ လီးကို အရငျးထိဖွဲထားသော အီစှတျက လညျး သူ့လကျကို မလှတျတော့ဘဲ လီးကွီးကို ဖွဲမွဲတိုငျး ဖွဲပွထားသညျ။
သန်တာလတျအားမလိုအားမရဖွငျ့နောကျသို့မှီထားသညျ့ကိုယျလုံးလေးမှာကွှ၍လာပွီး ရှသေို့ငိုကျကာ ရာဘာလီး တုဖွငျ့ အားရပါးရကွီး ဆောငျ့ဆောငျ့လိုး သညျ။ မကွာမီမှာပငျ သန်တာလတျမှာ ခါးလေးဆတျကနဲ ဆတျကနဲဖွဈသှားပွီး ထောငျထားသော ပေါငျနှဈလုံးမှာ စလေို့ကျခှာလိုကျဖွဈသှားရလသေညျ။ ညှနျ့ မောငျ ရစေငျလှကေားပျေါမှ ပွနျ၍ဆငျးလာ သညျ။ ပွီးတော့ စောစောက သူကွညျ့နခေဲ့သော ပနျးရုံလေးထဲဝငျကာ ဆကျ၍ ကွညျ့နသေညျ။ အီစှတျက သဈသားခုံပျေါမှ အောကျသို့ဆငျး၍ ရပျလိုကျသညျ။ သန်တာလတျ ပွတငျးပေါကျဝသို့ ရောကျ၍လာသညျ။ အပွငျမှရပျနသေော အီစှတျ၏ကိုယျလုံးကို သန်တာ လတျက လှမျး၍ဖကျလိုကျသကဲ့သို့ အီစှတျကလညျးသန်တာလတျကို ဖကျသညျ။ ဖကျတာမှ အတငျးကို ကွုံး၍ ဖကျသညျ။ သန်တာလတျမှာ မကျြလုံးလေးတှေ ကို မှိတျ၍ ကိုယျလုံးလေးကို ကြုံ့၍နရေသညျ။ ခဏတာ အားရပါးရဖကျထားပွီး တော့မှ လူခငျြးခှာလိုကျကာ အီစှတျက သူ၏အဝတျအစားမြားနှငျ့ သဈသားခုံလေးကို ကိုငျ၍ထှကျခှာသှားသလို သန်တာလတျ ကလညျး အီစှတျ၏ ကြောပွငျကွီးကိုလှမျးကွညျ့ရငျး ပွတငျးပေါကျမှနျတံခါးတှကေို ပိတျလိုကျ သညျ။ ပွီးတော့ အတှငျးမှလိုကျကာလေးကို ဆှဲ၍ကာလိုကျလတေော့သညျ။
သူတို့နှဈယောကျကိစ်စပွီးသှားကွပွီ။ မပွီးသေးသညျမှာ ညှနျ့မောငျ ဖွဈသညျ။ ပုဆိုးအတှငျးမှ မတျ၍တောငျနသေော လီးကွီးက ပွနျ၍ကမြသှားသညျ့ အပွငျ တဆတျဆတျဖွငျ့ ခုနျ၍နသေေးသညျ။ ညှနျ့မောငျ သကျပွငျးအကွိမျကွိမျခရြငျး စထေ့ားသော မီးဖိုခြောငျတံခါးကို ဖှငျ့၍ဝငျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ အိမျအတှငျးဖကျသို့ လြှောကျလာရငျး အကွံတဈခုရသှားကာ ရှမေိ၏အိပျခနျးရှသေို့အရောကျ ရပျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ အိပျခနျးတံခါးကို အသံ အုပျ၍ခေါကျလိုကျသညျ။ အနညျးငယျမြှ ကွာသှားတော့မှ အခနျးတံခါးက ပှငျ့သှားသညျ။ ဟငျ….အကို…လာ…ဝငျ…ညှနျ့မောငျ အခနျးထဲသို့ လှမျးဝငျလိုကျ တော့ ရှမေိက တံခါးကို ပိတျလိုကျသညျ။ဘာလဲ….လုပျမလို့လား.ရှမေိက ညှနျ့မောငျ၏ လကျမောငျးတဈဖကျကို ဆှဲလှုပျ၍ မကျြနှာလေးမော့၍ ရယျကွဲကွဲ လေး မေးသညျ။ ညှနျ့မောငျ ပါးစပျနှငျ့ မဖွပေါ။ ရှမေိကို အတငျးဖကျပွီး နမျးသညျ။ ထိုအခါ ရှမေိ၏ ခကျြအောကျသို့ လာ၍ ထောကျသော ညှနျ့မောငျ၏ ပုဆိုးအတှငျးမှ လီးကွီးက ရှမေိ၏ အမေးကို အဖွပေေးလိုကျပါသညျ။အကို…နအေုံး..ရှမေိက အတနျငယျရုနျးဖယျလိုကျတော့ ညှနျ့မောငျက သူမကို လှတျပေးလိုကျသညျ။ဘာလဲ ရှမေိ…အကို့ကိုတော့ အားနာပါတယျ….ကမြ ထဘီတှလောနတေယျ….လုပျလို့မရဘူး..ဟငျ….ဒါဆို ဘယျလိုလုပျမလဲ….ညှနျ့ မောငျ စိတျပကျြလကျပကျြဖွငျ့ ပွောသညျ။စိတျမပူပါနဲ့ အကို….အကို ကနြေပျအောငျတော့ကမြတတျနိုငျပါတယျ.ပွောပွီးသညျနှငျ့ ရှမေိက သူမ၏ခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျးတှငျ ဝတျထားသော အဝတျတှကေို ခြှတျလိုကျသညျ။ နို့အုံကွီး နှဈလုံး ဖှေးကနဲပျေါလာသညျနှငျ့ ညှနျ့မောငျက လှမျး၍ကိုငျသညျ။ ရှမေိက ညှနျ့မောငျ၏ ပုဆိုးကို ဆှဲ၍ခြှတျလိုကျသညျ။
လာ အကို…ပွောလညျးပွော ရှမေိက အိပျယာပျေါသို့ ပကျလကျလှနျလှဲလိုကျသညျ။ ထိုအခါ ညှနျ့မောငျက ကုတငျပျေါလှမျး တကျလိုကျပွီး ရှမေိ၏ ဘေး တှငျ ဒူးထောကျ၍ ငုံ့ကာ ရှမေိ၏ နို့အုံနှဈလုံးကို တဈလုံးပွီး တဈလုံး အားရပါးရ စို့လတေော့ သညျ။ ရှမေိ၏ လကျတဈဖကျက ညှနျ့မောငျ၏ ဗိုကျအောကျ သို့ရောကျသှားပွီး လီးတနျကွီးကို လကျလေးဖွငျ့ ဖှဖှလေး ဆုတျ ကာ ဂှငျးတိုကျ၍ပေးသညျ။ နို့နှဈလုံးကို စို့နရောမှ ညှနျ့မောငျက တဈခကျြ တဈခကျြ ရှေ မိ၏ မကျြနှာလေးကို လှမျး၍ လှမျး၍ နမျးလိုကျသေးသညျ။ ရှမေိကလညျး လီးတနျကွီးကို ဂှငျးတိုကျပေးရုံမြှမက လကျဖဝါးထဲသို့ ဂှေးအုကွီးကို ထညျ့ပွီး ပှတျပေး သညျ။ ဖှဖှလေး ဆုတျပေးသညျ။ ညှနျ့မောငျ၏ အသကျရှုသံတှေ တရှုးရှုးဖွဈ၍လာသညျ။ အကို ပကျလကျလှဲလိုကျ….ညှနျ့မောငျက အိပျယာပျေါ သို့ ပကျလကျလှဲခလြိုကျတော့ ရှမေိက ဘေးမှနေ၍ ငုံ့ကာ လီးတနျကွီးကို အရငျးမှကိုငျပွီး သူမပါးစပျထဲသို့ သှငျးနိုငျသလောကျ သှငျးလိုကျသညျ။ ပွီးလြှငျ နှုတျခမျးနှဈလှာဖွငျ့လီးခြောငျးကွီးကို ရှတေို့းနောကျငငျလုပျကာစုပျပေးသညျအား.အားအီး….အူး…ညှနျ့မောငျ၏ မကျြနှာကွီး ရှုံ့မဲ့သှားသညျ။ ရှမေိက လီး ကွီးကို အားရပါးရ စုပျနရေုံမြှမက ပါးစပျတှငျးတှငျ သူမ၏လြှာ လေးဖွငျ့လညျး လီးဒဈကွီးကို လှညျ့ပတျ၍ ယကျနသေေးသညျ။ ယောကျြားရငျ့မကွီးဖွဈ လကျြ ညှနျ့မောငျ ကိုယျလုံးကွီး တ ဆတျဆတျတုနျနသေညျ။
အီး…အား…အူး…အိုး…အား….အား….ညှနျ့မောငျ ဖငျကွီးကွှတကျလာသညျ။ ရှမေိကသူမ၏ပါးစပျထဲမှလီးကွီးကိုထုတျလိုကျပွီး တံတှေးမြားဖွငျ့ ပွောငျလကျနသေောလီးကွီးကိုလကျဖဝါးလေးဖွငျ့ ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျဆုပျကာခပျသှကျသှကျကွီးဂှငျးတိုကျပဈလိုကျသညျအိုး…အိုး…အား….အငျး..တခဏ အတှငျး လီးထိပျအပေါကျလေးမှ သုတျရညျမြားမှာ ပွှတျကနဲ ပွှတျကနဲ ပနျး၍ထှကျလာခိုကျ လကျမှလီးကို ဆကျ၍ ခပျသှကျသှကျဂှငျးတိုကျပေးရငျး ရှမေိ မှာ ဘေးမှနေ၍ ညှနျ့မောငျပျေါ မှောကျခလြိုကျတော့ ညှနျ့မောငျက သူမ၏ ကိုယျလုံးလေးကို အတငျးဆှဲဖကျကာ အငမျးမရနမျးလိုကျပါလတေော့သညျ။ အိပျယာထ ရခြေိုးသော အလအေ့ကငျြ့ရှိသညျ့ ညှနျ့မောငျမှာ ရခြေိုးခနျးရှိသော မီးဖိုခြောငျဖကျသို့ ဝငျ၍အလာ ထူး ထူးဆနျးဆနျးမွငျကှငျးတဈခုကို တှေ့ လိုကျရသဖွငျ့ မီးဖိုခြောငျထဲသို့ အဝငျမှာပငျ ညှနျ့မောငျ ခွစေုံရပျ၍ ကွညျ့နမေိသညျ။ သူ ကွညျ့နသေော အရာကတော့ အပျေါက တီရှပျအဖွူပှပှလေးကို ဝတျကာ အောကျကထဘီအနကျရောငျလေးကို တိုတိုလေး ဝတျပွီး နောကျတှငျစုစညျးထားသော ဆံပငျလေးကို အပျေါသို့လှနျ၍ ခေါကျတငျပွီး ဆံညှပျနှငျ့ ညှပျထားကာ သူ့ကိုကြောပေး ၍ ခကျြပွုတျနသေော သန်တာလတျ ပငျဖွဈလသေညျ။
မီးဖိုခြောငျထဲတှငျ တဈခါဘူးမြှ သန်တာလတျ ခကျြပွုတျနသေညျကို မတှဖေူ့းသညျ့အပွငျ ထဘီတိုတိုလေးနှငျ့ နောကျကြောမှမွငျနရေသော သန်တာလတျ၏ အလှကလညျး ကြော့ရှငျးသပျရပျ၍ နသေညျ။ ထဘီတိုတိုလေးဝတျထားသဖွငျ့ ခွသေလုံးသားလေးက ဝငျးနသေလို ဆံပငျကိုအပျေါသို့ လှနျ၍ညှပျထား သဖွငျ့ ဂုတျပိုးသားလေးကလညျး ဝငျး၍နသေညျ။ တဖနျ ထဘီတိုတိုလေးကို တငျးတငျးလေးဆှဲဝတျထားသဖွငျ့ သူမ၏ ဝိုငျးစကျမို့ ဖောငျးနသေော တငျသားတှကေ တဈရဈပျေါလှငျ၍နသေညျ။ ဟေ့…ဘာကွညျ့နတောလဲ….လူကို မမွငျဖူးတာကနြတောဘဲ…ဟငျး…ဟငျး…အကိုညှနျ့မောငျကွီး နျော….အခုတ လော တမြိုးကွီးဖွဈနတေယျ….သူ့ကိုလှညျ့မကွညျ့ဘဲ သူရှိနတောကို သိနသေညျ။ မိနျးမတှေ အာရုံခံစားမှုက ယောကျြားတှထေကျ ပို၍ထကျသညျ ဆိုသညျမှာ မှနျနသေညျ။ ဒါ့အပွငျ အခုတလောတမြိုးဖွဈနတောက သန်တာလတျဖွဈသညျ။ ဒါကို ညှနျ့မောငျကပဲ တမြိုးဖွဈနေ ပွနျသတဲ့။ တတျလညျး တတျနိုငျတဲ့ မိနျးမတှဟေု ညှနျ့မောငျ တှေးလိုကျသညျ။ ဗွုံးကနဲတော့ ညှနျ့မောငျ ရှကျသှားပွီး မကျြနှာရဲသှားသညျ။ ပွီးတော့မှ သူ့စိတျကို တညျငွိမျအောငျ လုပျလိုကျပွီး သန်တာလတျအနီးသို့ လြှောကျ၍လာကာ သူမ၏ နောကျနားတှငျ ရပျလိုကျသညျ။
မမလေး ထမငျးဟငျးခကျြတာ တဈခါမှ မတှဖေူ့းလို့ပါ…နောကျပွီး…ရှမေိ ဒီမနကျရှာပွနျသှားတယျလေ…ကဲ ဆကျပွောပါအုံး….နောကျပွီး ဘာဖွဈ လဲ….မမလေးကို နောကျကနကွေညျ့ရတာ ခါတိုငျးထကျ ပိုပွီး လှလာသလားလို့…”ညှနျ့မောငျတဈယောကျ ရှတျပွီ။ဟငျး…ဟငျး…ဒီမှာ သူကွိုကျတဲ့ ကွကျသားနဲ့ ဘူးသီး ကာလသားခကျြ ခကျြထားပါတယျနျော….ပွီးတော့ စားပှဲ ပျေါမှာလညျး သူကွိုကျတဲ့ နနျးကွီးသုပျနဲ့ ကျောဖီအိုး အဆငျသငျ့ရှိပါတယျ… ရခြေိုးပွီး စားတျောမူပါနျော.ခြောခြောလှလှ မှေးမှေးပြံ့ပြံ့ မိနျးကလေးတဈယောကျက အနားတှငျရပျလကျြက သူ့ကို ရငျးရငျးနှီးနှီးသူငယျခငျြး ပမာ ပွောဆို ဆကျဆံနတေော့ ညှနျ့မောငျ ရငျထဲမှာ ကွညျနူးမိတာ အမှနျပါ။ ကဲ….ရသှေားခြိုးတော့လေ….ညှနျ့မောငျ ကလေးတဈယောကျပမာ ခကျြခငျြးရခြေိုးခနျးရှေ့ သို့ လှညျ့ထှကျလာပွီး ရခြေိုးခနျးတံခါးကို ဖှငျ့လိုကျ သညျအျော…အကို…ဒီနေ့ ဆိုငျသှားစရာရှိတယျ….ညီမ ဘာသာ ကားမောငျးသှားမယျ….ထမငျးခြိုငျ့ လညျး ထညျ့သှား မယျ….အကို အိမျစောငျ့….အိမျမှာ စားလိုကျ အိပျလိုကျနဲ့ အားမှေးထား…မီးဖိုပျေါမှ ဟငျးအိုးကိုခရြငျး သန်တာလတျက လှမျး၍ပွောသညျ။ “အကို” တဲ့ “ညီမ” တဲ့ ပျေါတငျကွီး အသုံးအနှုနျး တှကေ ခကျြခငျြးပွောငျးသှားသညျဟိတျ.ဘာကွညျ့နတောလဲ….ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျတော့လေ….သန်တာလတျ က နောကျသလို ပွောငျသလိုဖွငျ့ လကျညှိုးလေးထိုးကာ သူ့ကိုပွောလိုကျတော့ ညှနျ့မောငျ ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျပွီး တံခါးပိတျကာ ရခြေိုးနလေိုကျတော့သညျ။
ညကလြှငျ တိုကျကွီးတဈလုံးထဲ၌ သူနှငျ့ သန်တာလတျတို့ နှဈယောကျထဲရှိနေ အိပျနရေမညျ့အရေးကိုတှေး၍ ညှနျ့မောငျမှာ နမေထိထိုငျမသာဖွဈ၍နသေညျ။ ညနငေါးနာရီလောကျတှငျ သန်တာလတျ အိမျသို့ ပွနျလာသညျ။အကို တဈယောကျထဲ ပငျြးနပွေီလား..ညီမလညျး စောစောပွနျလာခငျြတာ ပေးလေ.သန်တာ လတျ လကျထဲမှ ထမငျးခြိုငျ့နှငျ့ အထုတျတှကေို လှမျး၍ယူသညျ။ သန်တာလတျက ထမငျးခြိုငျ့ကိုပဲ လှမျး၍ပေး သညျ။ အျော…အကို…ကားက ဆီသိပျမလိုကျ ခငျြဘူး….အရငျလုပျနကြေ ဝပျရှော့က ည(၉)နာရီထိ ဖှငျ့တယျမဟုတျလား. …သှားလုပျပေးပါအုံး….ရော့ ကားသော့နဲ့ ပိုကျဆံ….သန်တာလတျက ညှနျ့မောငျ ဆှဲယူထားသော လကျထဲမှ ထမငျးခြိုငျ့ကို ပွနျ၍ယူပွီး သူမ၏လကျထဲမှ ကားသော့နှငျ့ ငှေ စက်ကူတဈထပျကို လှမျးပေးသညျ။ ညှနျ့မောငျက သန်တာလတျ လှမျးပေးသညျတို့ကို လှမျးယူလိုကျပွီး အိမျရှတေံ့ခါးဆီသို့ လြှောကျလာခဲ့သညျ။ အျော…အကို ပွနျလာရငျ အကို့ကို ပွစရာတဈခုရှိတယျသိလား…ဘာ လဲ….အခုပွပါလား….ဟှနျး….သှားမှာသှားစမျးပါ….ပွနျလာတော့ သိရမှာပေါ့….ညှနျ့မောငျ လှညျ့၍ထှကျခဲ့သညျ။ သန်တာလတျကတော့ အိမျမှာ သူနှငျ့နှဈ ယောကျထဲရှိသညျဟူသောအတှေးဖွငျ့ အ နရေဲ အပွောရဲဖွငျ့ ဖွဈနခေပြွေီ။ ဆကျ၍ဘယျလိုစခနျးသှားရမညျလဲဟူသော အတှေးဖွငျ့ ညှနျ့မောငျမှာ ရငျလေးစှာဖွငျ့ သကျပွငျးမကွာခဏခနြရေလတေော့သညျ။
ညှနျ့မောငျ အိမျပွနျရောကျတော့ ည(၁၀)နာရီရှိပွီ။ အိမျရှတေံ့ခါးတှငျ သော့တနျးလနျးနှငျ့ဖွဈ၍ ဖှငျ့ပွီးဝငျခဲ့သညျ။ သန်တာလတျ၏ အခနျးထဲတှငျ မီးလငျးနေ သေးသဖွငျ့ သန်တာလတျမှာ အိပျသေးပုံမရခြေ။ သူ၏ အိပျခနျးထဲသို့ဝငျပွီး ညှနျ့မောငျ အဝတျအစားတှေ လဲလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ဆေးလိပျသောကျခငျြလာ သဖွငျ့ စီးကရကျတဈလိပျမီးညှိပွီး အခနျးထဲတှငျပငျ သောကျနလေိုကျသညျ။ တဈအိမျလုံးက တိတျဆိတျ၍နသေညျ။ ဤအိမျထဲတှငျ သူနှငျ့ သန်တာလတျတို့ နှဈယောကျထဲပါလား ဆိုသညျ့အတှေးက ညှနျ့မောငျကို ခွောကျလှနျ့၍နသေညျ။ ဒီရကျပိုငျးအတှငျး သူတှကွေုံ့ခဲ့ရ၊ တှမွေ့ငျခဲ့ရသညျ့ သန်တာလတျနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ကိစ်စတှကေိုလညျး ညှနျ့မောငျ ပွနျ၍တှေးမိနသေညျ။ မတညျငွိမျသောစိတျကွောငျ့ သူသောကျနသေော စီးက ရကျမှာ အကုနျမွနျသှားသညျ။ အစီခံသာ ကနျြတော့သညျ့ စီးကရကျတိုကို ဆေးလိပျခှကျထဲသို့ ထိုးနဈလိုကျသညျ။ အကိုရေ…အကို…ညီမဆီလာပါအုံး….ဒီမှာ ပွစရာရှိလို့..လှမျးချေါ လိုကျသော သန်တာလတျ၏ အသံစာစာလေးကွောငျ့ ညှနျ့မောငျမှာ လေးပငျသောခွလှေမျးမြားဖွငျ့ သူ၏ အိပျ ခနျးထဲမှထှကျ၍ သန်တာလတျ၏ အိပျခနျးဆီသို့ လြှောကျ၍လာသညျ။ သူမ၏ အိပျခနျးမှာ တံခါးဖှငျ့၍ထားသညျ။ အိပျခနျးဝ ရောကျ၍ လှမျးဝငျလိုကျလြှငျပငျ ညှနျ့မောငျမှာ သငျးပြံ့သောမှေးရနံ့မြားနှငျ့ အတူ သန်တာလတျနှငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျမိလိုကျ သညျ။
အဝါရောငျဂါဝနျပါးပါးလေးကို တထပျတညျးဝတျထားသော သန်တာလတျမှာ မီးရောငျကို ကြောပေး၍ ရပျနသေညျ။ သူမ ၏ အတှငျးအင်ျဂါအစုံကထငျးလငျး လကျြလှပလှနျးသော ပနျးပုရုပျလေးပမာ ညှနျ့မောငျကို ဖမျးစားလိုကျသညျ။ မကျြနှာခငျြးဆိုငျမိသညျနှငျ့ ညှနျ့မောငျက သန်တာလတျကို ခွစေုံရပျ၍ ကွညျ့နေ လိုကျမိသညျ။ ရမကျတှလှေမျးနသေော မကျြလုံးအစုံဖွငျ့ သန်တာလတျကလညျး သူ့ကို တုနျ့ပွနျ၍ကွညျ့နသေညျ။ ခဏနတေော့မှ သန်တာလတျက ပွုံးလိုကျ သညျ။ လာ အကို….ပွစရာရှိလို့…အသံကို တမငျတိုး၍ပွောကွောငျး သိသာလှသညျ။ ညှနျ့မောငျမှာ အခနျးထဲသို့ဆကျ၍ဝငျလာပွီး ကုတငျခွရေငျးအ နား တှငျ ရပျနသေော သန်တာလတျ၏ ရှတှေ့ငျ မကျြနှာခငျြးဆိုငျရပျလိုကျပွနျသညျ။ သူ့မကျြလုံးတှကေတော့ သန်တာလတျဆီမှ မခှာပေ။ ညှနျ့မောငျ အနားသို့ ရောကျလာသညျနှငျ့ ကုတငျခွရေငျးတှငျ တငျထားသော သူမ၏ စကပျအညိုရောငျလေးကို ဆှဲ ယူကာ ညှနျ့မောငျဖကျသို့ ပွုံး၍လှညျ့လိုကျသညျ။ အကို….ဒီမှာကွညျ့စမျး….ညှနျ့မောငျ ကွညျ့လိုကျသညျ။ အညိုရောငျစကပျလေး၏ ပိတျသားလေးတှမှော တဈခုနှငျ့တဈခု ကျောနှငျ့ကပျထားသ လို လေးငါး နရော၌ ကပျ၍နသေညျ။ ညှနျ့မောငျ မစဉျးစားတတျ။ ကွောငျ၍ ကွညျ့နသေညျ။ သူ့ကို အကဲခတျသလို ကွညျ့နေ သော သန်တာလတျက ပွုံးလိုကျပွီး သူ့ဘေး သို့ တိုးကပျလိုကျသညျ။ဘာအခုမှ မသိခငျြယောငျဆောငျနတောလဲ….ညှနျ့မောငျ၏ လကျမောငျးကို လကျသီးဆုပျလေးဖွငျ့ထုရငျး အားမလိုအားမရ ပွောသညျ။အကိုလေ….ဟိုတဈနညေ့က အခနျးဝမှာ လာပွီးသောငျးကနျြးသှားတာ….အဲဒါ အဲဒီစကပျလေးနဲ့ ညီမသုတျထား တာဟှနျး ဘာမှနျးလဲမသိ ဘူး….ဝငျလာရငျရရဲ့သားနဲ့နောကျဆုံးစကားကိုတော့ သန်တာလတျမှာ ညှနျ့မောငျ၏ ရငျခှငျထဲသို့ တိုးဝငျပွီးပွောသညျ။
အကိုကတော့ တကယျပါပဲ….လကျထဲက စကပျလေးကို ကုတငျခွရေငျးသို့ ပဈတငျလိုကျပွီး ညှနျ့မောငျရငျခှငျထဲသို့ရောကျနသေော သူမ၏ ကိုယျ လုံးလေး အား ညှနျ့မောငျ၏ ရှဖေ့ကျနှငျ့ ရငျဘတျအုံကွီးတို့ကို ပှတျသပျလှညျ့ပတျ၍ပွောသညျ။ ညှနျ့မောငျ သတိလကျလှတျ ဖွဈသှားသညျ။ သန်တာလတျ၏ ကိုယျလုံး လေးကို သိမျးကွုံးဖကျလိုကျပွီး သူမ၏မကျြနှာလေးကို ငုံ့၍နမျးသညျ။ သူ့ကို တဈ ကိုယျလုံးထိတှလေ့ကျြရှိသညျ့ သန်တာလတျ၏ ခန်ဓာကိုယျလုံးလေးက ဂါဝနျပါးလေးတဈထပျတညျးသာ ဝတျထားသဖွငျ့ပကတိ အသားနှငျ့ ထိတှနေ့သေလို ထိတှခေံ့စားနရေသညျ့အပွငျ သန်တာလတျကလညျး မကျြလုံးလေးမြား မှိတျကာ မကျြနှာလေးကို မော့ပွီး အနမျးခံသညျ။ ပွီးတော့ တဖွညျးဖွညျးသူမ၏ နှုတျခမျးလုံးလုံးလေးနှဈခုက ဟ၍ လာသညျ။ ညှနျ့မောငျ၏ နှုတျခမျး အစုံ က သန်တာလတျ၏ နှုတျခမျးအစုံကို ငုံ့၍ နမျးစုပျလိုကျသညျ။ သူမ၏ကိုယျလုံးလေးမှာ ခွဖြေားလေးထောကျကာမွငျ့တကျလာရငျး လကျကလေးနှဈဖကျက လညျး ညှနျ့မောငျကိုအတငျးကွုံး၍ဖကျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ခြိုမွိနျသော သူမ၏ တုနျ့ပွနျ အနမျးက ညှနျ့မောငျတဈယောကျ သူမကို လှတျမပေးခငျြ အောငျ ဖွဈသှားရလတေော့သညျ။ ညှနျ့မောငျ၏ လကျတှကေ သန်တာလတျ၏ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးပျေါတှငျ ရှလြေ့ားပွေးလှား၍နသေညျ။ လုံးလုံးကဈြကဈြ ကားကားစှငျ့စှငျ့ တငျသားအစုံမှ သညျ ပုခုံးလုံးလုံးလေးတှအေထိတိုငျအောငျ စုနျဆနျရှလြေ့ား၍နသေညျ။ တဖွညျးဖွညျး သူတို့၏ ခန်ဓာကိုယျအပူခြိနျမြားမှာ တရှိနျရှိနျမွငျ့တကျလာကွသညျ။ နှုတျခမျးခငျြးခှာလိုကျတော့ သန်တာလတျ၏ မကျြနှာလေးက ညှနျ့မောငျ၏ ရငျအုပျကယျြကွီး ဆီသို့ ပွေးကပျလိုကျ သညျ။
မောလိုကျတာ အကိုရယျ…တအားကုနျ ပွေးလိုကျရသလိုပဲ..ညှနျ့မောငျ၏ ကိုယျလုံးကို ဖကျထားသော သန်တာလတျ၏ လကျကလေးတှကေ ခိုငျခိုငျမွဲမွဲ ဖကျ တှယျ၍ထားသညျ။ကို. ဟငျ….လာ ကိုရယျ….တို့နှဈယောကျထဲ ရှိတာဟာ….သူ့ကိုယျလုံးကွီးကို ဖကျပွီး သန်တာလတျက ကုတငျဘေးသို့ ဆှဲချေါသှားသညျ။ ကုတငျဘေးရောကျသညျနှငျ့ ရပျလိုကျ သညျ။ သန်တာလတျက ညှနျ့မောငျ၏ ပါးတဈဖကျကို ဖိကပျ၍ နမျးလိုကျပွီး သူ့ကိုဖကျထားသညျ့ လကျအစုံကို ဖယျရှား လိုကျ သညျ။ ပွီးလြှငျ သူမက ကိုယျပျေါရှိ ဂါဝနျပါးလေးကို လြှောကနဲ ခြှတျခလြိုကျသညျ။ ကို….ညီမ လှလားဟငျ…အငျး….ညှနျ့မောငျက ဝမျးခေါငျး သံကွီးနှငျ့ ပွောရငျး ဝတျလဈစလဈဖွဈသှားသော သန်တာလတျ၏ ကိုယျလုံးလေးကို အငမျးမ ရဆှဲဖကျလိုကျပွနျသညျ။ နအေုံးလေ ကိုရယျ….ကို့ အဝတျတှေ ခြှတျပေးအုံးမယျ…ညှနျ့မောငျတဈယောကျ အသိဉာဏျကငျးမဲ့သော စကျရုပျပမာဖွဈနခေပြွေီ။ သူဝတျထားသော ရှပျအကငြ်္ီကွယျသီး လေးတှကေို တ ထောကျထောကျဖွုတျနသေော သန်တာလတျ၏ နို့အုံလေးနှဈလုံးကို တို့ထိပှတျသပျကစားနသေညျ။ ညှနျ့မောငျ အကငြ်္ီကြှတျသှားပွီ။ ခါးမှပုဆိုးကို ဖွညျခြ လိုကျပွီး သန်တာလတျက ငုံ့ကွညျ့သညျ။ တုတျခိုငျရှညျလြားတောငျ့တငျးလှသော ညှနျ့မောငျ၏ လီးတနျကွီးက သူမ၏ အသဲနှလုံးကို ထိုးဆှလိုကျသလို လီး ကွီးကို မွငျပွီး ရငျထဲတှငျ ငွိမျ့ကနဲ ခံစားလိုကျရ သညျ။
လာ ကိုရယျ….ကုတငျပျေါသှားကွရအောငျလား…ညှနျ့မောငျ၏ လကျတဈဖကျကို ဆှဲချေါရငျး သန်တာလတျက ကုတငျပျေါသို့တကျကာ လှဲခလြိုကျတော့ ညှနျ့ မောငျက လညျး သူမ၏ ဘေးတှငျ လကျထောကျ၍ ထိုငျလိုကျပွီး သူမ၏ တဈကိုယျလုံးကို တစိမျ့စိမျ့ကွညျ့သညျ။ဟငျ့ကှယျ….အဲလိုကွီး ကွညျ့နတေော့မှာ လား….ဆီးစပျမှ အမှေးမဲလေးတှကေို လကျဖဝါးဖွငျ့ ပှတျသပျလိုကျပွီးမှ ညှနျ့မောငျက သူမ၏ နို့နှဈလုံးကိုငုံ့၍စို့သညျ။သူ့လကျကသူမ၏ ပေါငျတနျ တဈဖကျကိုစုနျဆနျပှတျနရေငျး စောကျဖုတျလေးပျေါရောကျ၍သှားသညျ။ သန်တာလတျ တှနျ့ကနဲ တဈခကျြဖွဈသှားသညျ။ မာမာလေးတငျးနသေော စောကျ ဖုတျနှုတျခမျးသားလေးတှကေ စိုစှတျ၍နသေညျ။ နှုတျခမျးသားနှဈ ခုကို အသာလေးဖွဲကာ အစလေ့ေးကို စမျးလိုကျသညျ။ အစလေ့ေးက မာ၍တောငျ့ တောငျ့လေးဖွဈနသေညျ။ သန်တာလတျ မကျြလုံးနှဈလုံးမှိတျပွီး အောကျနှုတျခမျးလေးကို မခငျြ့မရဲဖွငျ့ ကိုကျထားသညျ။ အဖုတျလေးကို စမျးလိုကျစဉျ နို့စို့ ပေးနေ သော အာရုံက ပကျြ၍စုပျအားက လြော့သှားသောကွောငျ့ သန်တာလတျက ညှနျ့မောငျ၏ ခေါငျးကို အသာလေးဖိ၍ ခပြေး သညျ။ ညှနျ့မောငျ၏ အသကျရှုသံက နှဈယောကျထဲရှိသောအခနျးတှငျးဝယျ တဖွေးဖွေးကယျြ၍လာသညျ။ စောကျပတျကို နှိုကျ၍ စောကျစလေ့ေးကို ထိထိနသေဖွငျ့ စောကျ ရညျတို့က တစိမျ့စိမျ့ထှကျလာကွသညျ။
လိုးတော့မညျဟု ဆုံးဖွတျလကျြ ညှနျ့မောငျက သူမ၏ ရငျသားအစုံဆီမှ မကျြနှာကို ခှာလိုကျကာ ကိုယျလုံးကိုအကွှ သန်တာလတျက သူ့ကိုယျလုံးကွီးကို ဖကျ၍ လှဲခလြိုကျပွီး အပျေါစီးမှနရောယူကာ ညှနျ့မောငျ၏ နှုတျခမျးတှကေို အာသာငမျးငမျးဖွငျ့ အတငျးဖိ၍ စုပျသညျ။ ညှနျ့မောငျက သူမ၏ ဝတျလဈစလဈကိုယျလုံးလေးကို ဖကျပွီး ကြောပွငျလေးကို သူ့လကျဖဝါးကွီးနှငျ့ ပှတျ၍ပေးသညျ။ သန်တာလတျ၏ လြှာ က ညှနျ့မောငျ၏ ပါးစပျတှငျးဝယျ မှနှေောကျ၍နသေညျ။ နှုတျခမျးအစုံကို ဖွုတျကာ မကျြနှာခငျြးခှာလိုကျပွီး ညှနျ့မောငျ၏ မကျြနှာကို စိမျးစိမျးကွညျ့ကာ သန်တာလတျက သူ၏ကိုယျလုံးကွီးပျေါ သို့ ခှ၍ တကျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ကိုယျကိုကွှ၍ ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျလိုကျကာ ညှနျ့မောငျ၏လီးတုတျတုတျရှညျရှညျကွီးကို လကျတဈဖကျဖွငျ့ကိုငျပွီး ဖငျ သားအစုံကို ကွှကာ စောကျပတျဝတှငျ တပွေီ့း တဖွေးဖွေးထိုငျခသြညျ။ အ….အ…အငျး…တုတျခိုငျလှနျးသောလီးက ထဈထဈနသေဖွငျ့ အံလေးကို ကွိတျ၍ အားဖွငျ့ ဖိဖိခသြညျ။ဗွဈ….ဗွဈ…အ…အငျး….ဗွဈ….ပွှတျ….ပလှတျ….အဟငျး…စောကျခေါငျးထဲလီးဝငျသှားသညျနှငျ့ ထပျ၍ထှကျလာသော အရညျမြားကွောငျ့ လီးဝငျဖွောငျ့ကာ တဆုံးဝငျသှား သညျ။ သန်တာလတျက ညှနျ့မောငျ၏ ရငျအုပျကွီးပျေါ လကျလေးနှဈဖကျထောကျ၍ ဖငျကွီးကို ကွှကွှ ပွီး ဆောငျ့သညျ။ဗွှတျ…ဖှတျ….ဖှတျ….ပလှတျ….ဗွဈ….ဗွဈ….ပွှတျ.သန်တာလတျက သူမ၏ ဖငျကွီးကို ဆောငျ့၍ ဆောငျ့၍အခြ ညှနျ့မောငျကလညျး အောကျမှနေ၍ ပွနျကော့၍ ဆောငျ့ ပေးသညျ။
ပလှတျ….စှပျ….စှပျ….အငျး..ဟငျး…ကို…အငျး…ကောငျးလားဟငျ….ကောငျးတယျ လတျရယျ….ဆောငျ့….ဆောငျ့….သန်တာလတျ တဈခကျြခွငျး ဆောငျ့ နရောမှ ခပျသှကျသှကျကွီး ဆောငျ့၍လာသညျ။ စောကျခေါငျးထဲမှ ထှကျလာသော အရညျကွညျတှကေ လီးအရငျးရှိ လမှေးတှပေျေါကိုပငျ ရှဲ နဈ၍နသေညျ။ ခဏအကွာခပျသှကျသှကျကွီး ဆောငျ့နရောမှ သန်တာလတျ၏ ဆောငျ့ခကျြတှမှော နှေး၍လာသညျ။ပွှတျ..ပလှတျ….ဖှတျ…စှပျ….စှပျ…ဗွဈ… ပွှတျ…ကို…လုပျပေးအုံးကှာ….လတျ….မောပွီမောသံလေးနှငျ့ ပွောလိုကျပွီး သန်တာလတျက ဘေးသို့လှမျးဆငျးလိုကျသညျ။ စောကျခေါငျးထဲမှ ပွှတျကနဲ ထှကျသှား သော လီးတနျကွီးက အရညျမြားပပှေလကျြ ကနျြခဲ့သညျကိုသန်တာလတျက အာသာငမျးငမျးဖွငျ့ တဈခကျြလှမျးကွညျ့လိုကျပွီး မကျြလုံးအစုံကို မှိတျထားလိုကျသညျ။ ညှနျ့မောငျ ထလိုကျပွီး သူမ၏ပေါငျနှဈဖကျကို ဒူးကှေး၍ရငျဘတျပျေါတှနျးတငျလိုကျ ပွီး သူက ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျကာ စောကျခေါငျး ဝသို့ လီးကိုတပွေီ့း ဖိသှငျးသညျ။
ပွှတျ….ကြှတျ….ကြှတျ….သန်တာလတျ၏ မကျြနှာလေး ရှုံ့မဲ့သှားသညျ။ သန်တာလတျ၏ ခွထေောကျနှဈဖကျကို လှတျပေးလိုကျတော့ သူမက တဈတီတူးလေး လို ခွထေောကျလေးတှကေို ညှနျ့မောငျတှနျးတငျထားသညျ့အတိုငျးထားလိုကျသညျ။ ညှနျ့မောငျက သူမ၏ နို့ နှဈလုံးကို ဘေးမှပတျ၍ ဆှဲဆှဲပွီး ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျလကျြမှ ပုခကျလှဲသလို ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးသညျ။ ပှတျ….ဖှတျ….ပွှတျ..ဖှတျ…ဗွဈ…စှပျ…စှပျ….အငျး…ဟငျး….ကို….အားနညျးနညျး ထညျ့အုံး….ဟငျး…ဟငျး..ပွှတျ..ပွှတျ..ဒုတျ..ပွှတျ…ပွှတျ.အား…အား…ကောငျးလိုကျတာ….ကိုရယျ….နို့ကို နာနာကိုငျစမျးပါ..အငျး…ဟုတျပွီ….ပွငျးပွငျး ဆောငျ့…ဆောငျ့ ….အ….ပွှတျ….ဒုတျ…ဗွှတျ…ပွှတျ….စှတျ…ဖှတျ….ဟုတျပွီ…ဟုတျပွီ….။ သန်တာလတျမှာ ကာမမီးတှေ တောကျလောငျပွီး အားမလိုအားမ ရနှငျ့ နှုတျခမျးလေးတှတေဆတျဆတျတုနျနသေညျ့ ကွားမှမပီမသနှငျ့ ပွောသညျ။ပွှတျ.စှတျ…ပွှတျ…အငျး…ကို..အငျး…ဟငျး…ဟငျး.လတျ…ပွီးခငျြပွီ… ဆောငျ့..ဆောငျ့.အား.အမလေးအား.အိုး….အီး….။ ညှနျ့မောငျက သူမ၏နို့နှဈလုံးကို အတငျးညှဈ၍ ဆှဲကာ အားသှနျ၍ဆောငျ့ပဈလိုကျသညျ။ သန်တာလတျ မှာ စောကျ ခေါငျးထဲက ရှီးကနဲသုတျရညျမြားပနျးထှကျခိုကျ ညှနျ့မောငျမှာလညျး(၁၀)ခကျြမြှအံကွိတျ၍ ဆောငျ့လိုကျပွီးသုတျရညျမြား ကို ပနျးထုတျလိုကျ လတေော့သညျ။ အထဲတှငျ ပွညျ့လြှံသှားသော နှဈယောကျစလုံး၏ သုတျရညျမြားက စောကျပတျဝကို လီး တုတျတုတျကွီးကအပွညျ့အကွပျပိတျဆို့ထား သညျ့ကွားမှပငျ အပွငျသို့ တစိမျ့စိမျ့စီးထှကျလာကွလတေော့သညျ။ ပွီးပါပွီ
လရည်တွေ ဒလဟော သူ့ရဲ့လီးကို အသေမက်မော
ခြံဝန်းကျယ်ကြီးတစ်ခု၊ နှစ်ဧကခန့် ကျယ်ဝန်းသည်။ ထိုခြံဝန်းကျယ်ကြီးအတွင်းရှိ တစ်ထပ်တိုက်လေးက စိမ်းပြာ ရောင်ဆေးသုတ်ထားသည်။ တစ်ထပ်တိုက်ဆိုပေမယ့် ခပ်သေးသေးတော့မဟုတ်ပါ။အဆောက်အဦးပမာဏပင် ပေ(၅၀) ပတ်လည်လောက်ရှိသည်။ တစ်ထပ်တိုက်လေး၏ နောက်မီးဖိုချောင်နှင့် တည့်တည့်လောက်ရှိ တိုက်လေး၏ ဘေးဖက်နား တွင် ရေစင်တစ်ခုရှိပြီး ထိုရေစင်၏ရှေ့ အိမ်ရှေ့ဘက်နားတွင်တော့ ကားဂိုဒေါင်လေးတစ်ခုရှိလေ သည်။ တဖန်တိုက်လေး၏ နောက်ဖက်ခြံဝန်း၏ ဒေါင့်လောက်တွင် ဂိုဒေါင်လိုလို သစ်သားအိမ်လေးတစ်လုံးရှိလေသည်။ ခြံဝန်းကျယ်ကြီးထဲတွင်တော့ သီးပင်၊ စားပင်၊ အပင်ကြီးများ၊ အရိပ်ရ အပင်ကြီးများအပြင် အိမ်ရှေ့ဖက်တွင်တော့ ပန်းအလှများ စိုက်ပျိုးလျက် ခုံတန်းလျား လေးများနှင့်အတူ ပန်းခြံ လေးသဖွယ် ပြုလုပ်ထားလေသည်။
အချိန်က ည(၁၀)နာရီကျော်ပြီဖြစ်သည်။ ခြံဝန်းထဲရှိ ပန်းခြံလေးထဲတွင် လူတစ်ယောက် ထိုင်နေပြီး လက်ထဲမှ စီးကရက်ကို ဖွာ၍ တစုံတရာကို စဉ်းစား တွေးတော၍နေသည်။ ထိုသူကတော့ ဤခြံဝန်းနှင့် တိုက်တို့၏ ပိုင်ရှင် သူဌေးကြီး ဦးကျင်မောင်၏ လူယုံတပည့်ရင်းလည်းဖြစ် သူဌေးကြီးနှင့် သူဌေးကြီး ကတော် သန္တာလတ်တို့၏ ဒရိုက်ဘာလည်းဖြစ်သည့် အသက်(၃၅)နှစ်လောက်ရှိသည့် ညွှန့်မောင်ဆိုသော လူတစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်။ ညွှန့်မောင်တစ် ယောက် စီးကရက်ဖွာ ရင်း မမလေး(သန္တာလတ်)၏ အကြောင်းကို စဉ်းစား၍နေသည်။ သန္တာလတ်မှာအသက်(၃၀)ပင်မပြည့်တတ်သေးသော်လည်း အသက်(၆၀)အရွယ် ဦးကျင်မောင်ကို လက်ထပ်ခဲ့ သည်။ သန္တာလတ်မှာ အပြစ်ပြောစရာမရှိလောက်အောင် ချောမောလှပသူလေးဖြစ်သည်။ ယခု သဌေး ကြီးဦးကျင်မောင် ခရီး ထွက်သွားခိုက်တွင် သန္တာလတ်မှာ ညွှန့်မောင်ကို ရေလာမြောင်းပေးတွေ လုပ်နေသည်။ သူမ၏ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးကို ပင် ညွှန့် မောင်မြင်ဖူးခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သူမအား ညွှန့်မောင် ရှောင်ခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်ထိလက်ရောက် မကျူးလွန်ခဲ့ပါ။ ဒါကလည်း သူတို့နှစ်ယောက်ကြားတွင် ခြားထားသော တံတိုင်းက ထူထဲကြီးမားလှသည်။ ညွှန့်မောင် အသက်(၂၀)ပတ်ဝန်း ကျင်အရွယ်ထဲက ဦးကျင်မောင်ထံ ရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်သည်။
မိဘညီအစ်ကိုမောင်နှမ မရှိတော့သည့် တစ်ကောင်ကြွက် ညွှန့်မောင်အား သူဌေးကြီး ဦးကျင်မောင်က ဒရိုက်ဘာတစ်ယောက်အနေမျိုးသာမက တူသား သဖွယ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ထား ခဲ့တာဖြစ်သည်။ ဒီတော့ ညွှန့်မောင်တစ်ယောက် ဦးကျင်မောင်၏ မျက်နှာကို ထောက်ထားရသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတူနေ လာတော့လည်း ညွှန့်မောင်စိတ်ထဲ ဦးကျင်မောင်ကို မိဘသဖွယ်ကိုးစားခင်တွယ်နေမိသည်ဖြစ်တော့ သူ့အနေနှင့် ဘယ်လိုပဲ သန္တာလတ်၏ အပေါ် သဘောထားပါစေ ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှု မဖြစ်အောင်တော့ ညွှန့်မောင်မှာ အတော်ကြီး စိတ်ကိုတင်း လျက် ရှောင်ရှားနေခဲ့ရလေသည်။ တကယ်တော့ မမလေး(သန္တာလတ်) ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆင်ခြင်ဖို့ ကောင်းလေသည်။ ဖအေနှင့် သမီးအရွယ်မျှပင် မက အသက်ကွာခြားသည့် သူကိုယူထားတော့လည်း သူမကို ကာမမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုရအောင် ဘယ်စွမ်း ဆောင်ပေးနိုင်ပါ့မလဲဟု ညွှန့်မောင် တွေးမိသည်။ သူဌေးကြီး ဦးကျင်မောင်မှာ ငွေပေါ သူတစ်ယောက်မို့ အခုမှမဟုတ်၊ ဟိုအ ရင်ထဲက မိန်းမကိစ္စ ရှုပ်ပွေခဲ့တာဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းသဘောအရ ဦးကျင်မောင်မှာမကြာခဏခရီးထွက်ရတတ်ပြီး ခရီးထွက် ရာမှ ပြန်လာလျှင်လည်း တစ်ရက်မျှသာအိမ်တွင်အောင်းနေသည်။ နောက်နေ့တွေတွင် နိုက်ကလပ်များဆီသို့ ဦးကျင်မောင် အား ညွှန့်မောင်က လိုက်ပို့ပေးနေကြဖြစ်လေသည်။
ဒီတော့လည်း သန္တာလတ်မှာ ဆန္ဒတွေ ဘယ်လိုလုပ်ပြည့်ဝနိုင်ပါတော့မ လဲဟု တွေးရင်း ညွှန့်မောင် သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်သည်။ ပြီးတော့လက်ထဲမှ အစီခံနားရောက်နေပြီဖြစ်သော စီးကရက် ကို လက်ညှိုးဖြင့် တောက်ထုတ်လိုက်ပြီး လက်ပတ်နာရီကို ကြည့်လိုက်သည်။ ည(၁၁)နာရီရှိပြီဖြစ်သည်။ ထိုင် နေရာမှ ညွှန့်မောင် မတ်တပ်ထ၍ ရပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ အိမ်ထဲသို့ ပြန်ဝင်ရန် အိမ်ဘေးဖက်မှ ပတ်၍ နောက်ဖေးဘက်သို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။သူစပြီး အိမ်ထဲကထွက်လာကတည်းကမီးဖိုချောင်ဘေးတံခါးကထွက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ယခုလည်း သူပြန်စေ့ထားခဲ့သော မီးဖိုချောင်တံခါးမှပင် ပြန်၍ ဝင်ရမည် ဖြစ်သည်။ တံခါးရှေ့သို့အရောက် စေ့ထား သောတံခါးကို တွန်းဖွင့်မည်အလုပ် ညွှန့်မောင်၏ အကြည့်က အိမ်ဘေးဖက်သို့ ရောက်၍သွားသည်။ ဟာ…ဘာ လဲ မသိဘူး….ကားဂိုဒေါင်နှင့်တိုက်နံဘေးကြားသန္တာလတ်၏ အိပ်ခန်းပြတင်းပေါက်ဘေးတွင် မာလီကုလား အီစွတ်မှာ နံရံကိုကပ် ၍ ငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက် သည်ကို ညွှန့်မောင် တွေ့လိုက်ရသည်။ ညွှန့်မောင်တံခါးရှေ့မှခွာ၍ နောက်သို့ဆုတ်ကာ အနီးရှိ ပန်းရုံ အကွယ်မှနေ၍ ကြည့်နေလိုက်သည်။ အီစွတ်က ငုတ်တုတ်လဲထိုင်ချပြီးရောသူ့လက်တစ်ဖက်ကို အပေါ်သို့မြှောက်၍ သူ၏ ခေါင်းပေါ်သို့ရောက်နေသော ပြတင်းပေါက်မှန်တံခါးကို လက်ညှိုးထိပ်လေးဖြင့် သုံးလေးချက်မျှ ခေါက်လိုက်သည်။ အခန်းထဲ တွင် မီးချောင်းဖွင့်ထားသည်။ ထိုပြတင်းပေါက်မှာ သူဌေးကြီးဦးကျင်မောင်နှင့် သန္တာလတ်တို့ အိပ်သည့် ကု တင်ကြီး၏ ခေါင်း ရင်းဘေးဖက်တွင် ရှိလေသည်။
အီစွတ်က မှန်တံခါးကို ခေါက်လိုက်သော်လည်း ဘာမှ ထူးခြားလာမှုကို မတွေ့ရပေ။ ခဏမျှ ကြာတော့ အီစွတ်က မှန်တံခါးကို လက်တစ်ဖက်မြှောက်၍ ခေါက်ပြန်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ လေးငါးချက်လောက် ခေါက် လိုက်သည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ တအောင့်မျှကြာတော့ မှန်ပြတင်းပေါက်အတွင်းဖက်မှ ကာ ထားသော လိုက်ကာစလေး ဘေးသို့ ရွှေ့သွားပြီး သန္တာလတ်၏ မျက်နှာ မှန်တံခါးအတွင်းမှ ပေါ်လာသည်။ သန္တာလတ်က ပြတင်းပေါက်ရှေ့အောက်ဖက် သို့ ကြည့်လိုက်သည်။ အီစွတ်ကိုတွေ့လျှင် ခဏနေရန် လက်ကာပြပြီး မှန်ပြတင်းတံခါးအတွင်းမှ သန္တာလတ် မျက်နှာက ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ခဏအ ကြာ ပြတင်းပေါက်မှန်တံခါးက ပွင့်၍သွားသည်။ သန္တာလတ်က တံခါးရွက်များကို ဖောက် ချိတ်များ ချိတ်၍ အသေအချာဖွင့်လိုက်သည်။ အီစွတ် ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရာမှ ထရပ်လိုက်သည်။ သန္တာလတ်၏ လက်တစ်ဖက် အပြင်သို့ထွက်လာပြီးငါးရာတန်တစ်ရွက်လှမ်းပေးလိုက်သည်ကို တွေ့လိုက်ရ သည်။ အီစွတ်က ငါးရာတန်ကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး သန္တာလတ်ကို ဆလံပေးလိုက် သည်။ သန္တာလတ်က အီစွတ်ကို ပြုံးပြလိုက်ပြီး ပြတင်းပေါက်မှ ပျောက် ကွယ်၍ သွားသည်။ ထိုအခါတွင် အီစွတ်က သူ၏ နောက်နားရှိ ကားဂိုဒေါင်ဘေးသို့ ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးဖြင့် လျှောက်လာပြီး ခွေးခြေအရွယ် သစ်သားခုံ တစ်လုံးကို ယူလာသည်။ ပြီးတော့ ဖွင့်ထားသော ပြတင်းပေါက်ဆီသို့ လျှောက်လာပြီး ပြတင်းပေါက်ရှေ့တွင် သစ်သားခုံကို ချလိုက်သည်။
ပြီးတော့ သူ ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်အစားတွေအားလုံးကို ချွတ်လိုက်သည်။ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားသော အီစွတ်၏ ကိုယ်လုံးကြီးက မဲ မှောင်၍နေသည်။ အလုပ်ကြမ်းသမားပီပီ တစ်ကိုယ်လုံး ခိုင်မာတောင့်တင်းကာ ကြွက်သားတွေက သူ့နေရာနှင့်သူ အဖုအ ထစ်တွေ ကြွ၍နေသည်။ ကြီးမားတုတ်ခိုင်သော သူ၏လီးတန်ကြီးက တောင်မတ်၍ နေသည်။ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားသည် နှင့် အီစွတ်က သစ်သားခုံလေးပေါ်တက်၍ ရပ်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ပြတင်းပေါက်နှင့် သူ၏ကိုယ်လုံးမှာ အံကိုက်ဖြစ်၍နေ သည်။ အီစွတ်က ပြတင်းပေါက်ဖက်သို့ လှည့်ကာ တစောင်မကျတကျလေး ရပ်လိုက်သည်။ သူ့ မျက်လုံးတွေက ပြတင်း ပေါက်ဝမှနေ၍ အခန်းတွင်းသို့ ကြည့်ရင်း သူ၏ ကြီးမားတုတ်ခိုင်လှသော လီးကြီးက ပို၍ တင်းပြောင်တောင်မတ်လာသည်။ ညွှ န့်မောင် သေသေချာချာကြည့်မိသည်။ အီစွတ် သူ့လီးကို ဆီတစ်မျိုးမျိုး သုတ်လိမ်းလာမှန်း သိသာလှသည်။ လီး ကြီးမှာ မဲနက်၍ အခန်းတွင်းမှ မီးချောင်း အလင်းရောင်နှင့် ပြောင်လက်၍နေသည်။ အီစွတ်မျက်လုံးတွေက အခန်းတွင်းသို့ တ စိုက်မတ်မတ်ကြည့်၍နေသည်။ အိပ်ခန်းတွင်းတွင်ရှိသည့် သန္တာလတ် ကို ညွှန့်မောင် မမြင်ရချေ။ သန္တာလတ် ဘယ်လိုရှိသည် ကို သူသိချင်လာသည်။ ပြတင်းပေါက်ရှေ့သို့ မသွားဘဲ အခန်းထဲသို့ မြင်နိုင်မည့်နည်းလမ်းကို သူ စဉ်းစားမိလိုက်သည်။ သူ ရောက်နေရာ အရှေ့ဖက်နားရှိ ရေစင်ပေါ်သို့ တက်သည့်လှေကားအတိုင်း ညွှန့်မောင် တက်လာခဲ့သည်။ ရေစင်ပေါ်ထိ မ တက် တော့ဘဲ လှေကားတဝက်လောက်တွင် ညွှန့်မောင် ရပ်လိုက်သည်။ မြင်ရပါပြီ။ အိပ်ခန်းထဲမှ သန္တာလတ်ကို မြင်လိုက်ရ ပါပြီ။
သန္တာလတ်က ခြေရင်းဖက်ရှိ ကုတင်တိုင်တစ်ခုကို ခေါင်းအုံးတစ်လုံးအလျားလိုက် ကပ်ထောင်၍ ကိုယ်ကို ခပ်လျှော လျှောလေးမှီကာ အိပ်ယာပေါ်တွင် အီ စွတ်ဖက်သို့လှည့်၍ ထိုင်နေသည်။သန္တာလတ်မှာ ဝတ်လစ်စလစ် ချွတ်မထားပေမယ့် အောက်ပိုင်းတွင် ထဘီမရှိဘဲ အပေါ်ပိုင်းတွင် ဝတ်ထားသော ရင် စေ့ အင်္ကျီလေး၏ ရင်ဘတ်ရှိ အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်ထားကာ နို့အုံနှစ်လုံးက အထင်းသားပေါ်ထွက်၍နေသည်။ ခပ် လျှောလျှောမှီ၍ ထိုင်ရင်း ဒူးနှစ် လုံးကို ထောင်ကာ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲကားထားပြီး သူမ၏ လက်တစ်ဖက်က ပေါင်ကြားထဲ တွင်ရှိ၍နေသည်။ ပြီးတော့ သူမလက်က တလှုပ်လှုပ်ဖြစ် နေသဖြင့် ညွှန့်မောင် သေချာကြည့်လိုက်သည်။ ညွှန့်မောင် သိ လိုက်ပါပြီ။ သန္တာလတ်၏ ပေါင်ကြားထဲမှ လက်ကကိုင်ထားတာက ရာဘာလီးအတု ဖြစ်သည်။ သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထည့်ကာ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်နေသည်။ သူမ၏ မျက်လုံးတွေက အီစွတ်ကို စိုက်၍ကြည့်နေသည်။ အထူးသဖြင့် အီ စွတ်၏ တောင်မတ်တင်းပြောင်နေသော ကြီးမားတုတ်ခိုင်လှသည့်လီးကြီးကိုဖြစ်သည်။စောက်ပတ်ထဲသို့ ရာဘာလီးအတုကို ထုတ်လိုက် သွင်းလိုက် လုပ်ပေးနေရင်း ကျန်သော သူမ၏ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ဟင်းလင်းပေါ်နေသော သူမ၏ နို့အုံနှစ် လုံးကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ဆုတ်ချေ၍ပေး နေသည်။ နို့သီးလေးတွေကိုလည်း သူမဘာသာ လက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် ညှပ်ညှပ် ပြီး ပွတ်လှည့်ပေးသည်။
သန္တာလတ်၏ မျက်နှာလေးတွင် ချွေးစေးလေးတွေ ပျံ၍နေသည်။ မျက်နှာလေးတစ်ခုလုံး နီမြန်းကာ ရာဂစိတ်တွေ ထကြွနေသော သူမ၏ မျက်နှာလေးမှာ အိုလျက် ငိုချင်သလို မဲ့တဲ့တဲ့လေး ဖြစ်နေပုံမှာ သူမ၏ မျက်နှာလေးကို သေသေချာ ချာကြည့်လိုက်ရသည်နှင့် ညွှန့်မောင်၏ တောင်မတ်နေပြီဖြစ်သော လီး တန်ကြီးမှာ တင်းကနဲ တင်းကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားရလေ သည်။ အီစွတ်ကလည်း မတ်တပ်ရပ်လျက်က တောင်မတ်တင်းပြောင်နေသော သူ၏ ကြီးမားတုတ်ခိုင် လှသည့် လီးမဲမဲကြီးကို တငေါက်ငေါက်ဖြစ်အောင် လုပ်ပြလိုက် လက်ညှိုးလက်မနှင့် ညှပ်၍ လီးကို အရင်းထိ ဖြဲပြလိုက်ဖြင့် လုပ်ပြသည်။ ထိုအခါမျိုး တွင် သန္တာလတ်မှာ နောက်သို့မှီထားသောသူမ၏ဦးခေါင်းလေးကို ရှေ့သို့ ဟပ်ကနဲ ကြွလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးဟလျက် မျက် တောင်မခတ် လီးကြီးကို စိုက် ကြည့်ကာ လက်တစ်ဖြင့် ကိုင်ထားသော ရာဘာလီးကို ခပ်သွက်သွက်ကြီး ဆောင့်လိုးပစ်လိုက် လေသည်။လက်တစ်ဖက်နှင့်နို့တွေကိုနယ်ရင်း ရာဘာလီးတု ကို ကိုင်ထားသော လက်က ခပ်သွက်သွက်ကြီး ဆောင့်ဆောင့် လိုးနေသည်။ သန္တာလတ်၏ မျက်လုံးတွေက တချက်တချက် စင်းစင်းကျသွားသည်။ လီးကို အရင်းထိဖြဲထားသော အီစွတ်က လည်း သူ့လက်ကို မလွှတ်တော့ဘဲ လီးကြီးကို ဖြဲမြဲတိုင်း ဖြဲပြထားသည်။
သန္တာလတ်အားမလိုအားမရဖြင့်နောက်သို့မှီထားသည့်ကိုယ်လုံးလေးမှာကြွ၍လာပြီး ရှေ့သို့ငိုက်ကာ ရာဘာလီး တုဖြင့် အားရပါးရကြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုး သည်။ မကြာမီမှာပင် သန္တာလတ်မှာ ခါးလေးဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲဖြစ်သွားပြီး ထောင်ထားသော ပေါင်နှစ်လုံးမှာ စေ့လိုက်ခွာလိုက်ဖြစ်သွားရလေသည်။ ညွှန့် မောင် ရေစင်လှေကားပေါ်မှ ပြန်၍ဆင်းလာ သည်။ ပြီးတော့ စောစောက သူကြည့်နေခဲ့သော ပန်းရုံလေးထဲဝင်ကာ ဆက်၍ ကြည့်နေသည်။ အီစွတ်က သစ်သားခုံပေါ်မှ အောက်သို့ဆင်း၍ ရပ်လိုက်သည်။ သန္တာလတ် ပြတင်းပေါက်ဝသို့ ရောက်၍လာသည်။ အပြင်မှရပ်နေသော အီစွတ်၏ကိုယ်လုံးကို သန္တာ လတ်က လှမ်း၍ဖက်လိုက်သကဲ့သို့ အီစွတ်ကလည်းသန္တာလတ်ကို ဖက်သည်။ ဖက်တာမှ အတင်းကို ကြုံး၍ ဖက်သည်။ သန္တာလတ်မှာ မျက်လုံးလေးတွေ ကို မှိတ်၍ ကိုယ်လုံးလေးကို ကျုံ့၍နေရသည်။ ခဏတာ အားရပါးရဖက်ထားပြီး တော့မှ လူချင်းခွာလိုက်ကာ အီစွတ်က သူ၏အဝတ်အစားများနှင့် သစ်သားခုံလေးကို ကိုင်၍ထွက်ခွာသွားသလို သန္တာလတ် ကလည်း အီစွတ်၏ ကျောပြင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ရင်း ပြတင်းပေါက်မှန်တံခါးတွေကို ပိတ်လိုက် သည်။ ပြီးတော့ အတွင်းမှလိုက်ကာလေးကို ဆွဲ၍ကာလိုက်လေတော့သည်။
သူတို့နှစ်ယောက်ကိစ္စပြီးသွားကြပြီ။ မပြီးသေးသည်မှာ ညွှန့်မောင် ဖြစ်သည်။ ပုဆိုးအတွင်းမှ မတ်၍တောင်နေသော လီးကြီးက ပြန်၍ကျမသွားသည့် အပြင် တဆတ်ဆတ်ဖြင့် ခုန်၍နေသေးသည်။ ညွှန့်မောင် သက်ပြင်းအကြိမ်ကြိမ်ချရင်း စေ့ထားသော မီးဖိုချောင်တံခါးကို ဖွင့်၍ဝင်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ အိမ်အတွင်းဖက်သို့ လျှောက်လာရင်း အကြံတစ်ခုရသွားကာ ရွှေမိ၏အိပ်ခန်းရှေ့သို့အရောက် ရပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ အိပ်ခန်းတံခါးကို အသံ အုပ်၍ခေါက်လိုက်သည်။ အနည်းငယ်မျှ ကြာသွားတော့မှ အခန်းတံခါးက ပွင့်သွားသည်။ ဟင်….အကို…လာ…ဝင်…ညွှန့်မောင် အခန်းထဲသို့ လှမ်းဝင်လိုက် တော့ ရွှေမိက တံခါးကို ပိတ်လိုက်သည်။ဘာလဲ….လုပ်မလို့လား.ရွှေမိက ညွှန့်မောင်၏ လက်မောင်းတစ်ဖက်ကို ဆွဲလှုပ်၍ မျက်နှာလေးမော့၍ ရယ်ကြဲကြဲ လေး မေးသည်။ ညွှန့်မောင် ပါးစပ်နှင့် မဖြေပါ။ ရွှေမိကို အတင်းဖက်ပြီး နမ်းသည်။ ထိုအခါ ရွှေမိ၏ ချက်အောက်သို့ လာ၍ ထောက်သော ညွှန့်မောင်၏ ပုဆိုးအတွင်းမှ လီးကြီးက ရွှေမိ၏ အမေးကို အဖြေပေးလိုက်ပါသည်။အကို…နေအုံး..ရွှေမိက အတန်ငယ်ရုန်းဖယ်လိုက်တော့ ညွှန့်မောင်က သူမကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ဘာလဲ ရွှေမိ…အကို့ကိုတော့ အားနာပါတယ်….ကျမ ထဘီတွေလာနေတယ်….လုပ်လို့မရဘူး..ဟင်….ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ….ညွှန့် မောင် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် ပြောသည်။စိတ်မပူပါနဲ့ အကို….အကို ကျေနပ်အောင်တော့ကျမတတ်နိုင်ပါတယ်.ပြောပြီးသည်နှင့် ရွှေမိက သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတွင် ဝတ်ထားသော အဝတ်တွေကို ချွတ်လိုက်သည်။ နို့အုံကြီး နှစ်လုံး ဖွေးကနဲပေါ်လာသည်နှင့် ညွှန့်မောင်က လှမ်း၍ကိုင်သည်။ ရွှေမိက ညွှန့်မောင်၏ ပုဆိုးကို ဆွဲ၍ချွတ်လိုက်သည်။
လာ အကို…ပြောလည်းပြော ရွှေမိက အိပ်ယာပေါ်သို့ ပက်လက်လှန်လှဲလိုက်သည်။ ထိုအခါ ညွှန့်မောင်က ကုတင်ပေါ်လှမ်း တက်လိုက်ပြီး ရွှေမိ၏ ဘေး တွင် ဒူးထောက်၍ ငုံ့ကာ ရွှေမိ၏ နို့အုံနှစ်လုံးကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး အားရပါးရ စို့လေတော့ သည်။ ရွှေမိ၏ လက်တစ်ဖက်က ညွှန့်မောင်၏ ဗိုက်အောက် သို့ရောက်သွားပြီး လီးတန်ကြီးကို လက်လေးဖြင့် ဖွဖွလေး ဆုတ် ကာ ဂွင်းတိုက်၍ပေးသည်။ နို့နှစ်လုံးကို စို့နေရာမှ ညွှန့်မောင်က တစ်ချက် တစ်ချက် ရွှေ မိ၏ မျက်နှာလေးကို လှမ်း၍ လှမ်း၍ နမ်းလိုက်သေးသည်။ ရွှေမိကလည်း လီးတန်ကြီးကို ဂွင်းတိုက်ပေးရုံမျှမက လက်ဖဝါးထဲသို့ ဂွေးအုကြီးကို ထည့်ပြီး ပွတ်ပေး သည်။ ဖွဖွလေး ဆုတ်ပေးသည်။ ညွှန့်မောင်၏ အသက်ရှုသံတွေ တရှုးရှုးဖြစ်၍လာသည်။ အကို ပက်လက်လှဲလိုက်….ညွှန့်မောင်က အိပ်ယာပေါ် သို့ ပက်လက်လှဲချလိုက်တော့ ရွှေမိက ဘေးမှနေ၍ ငုံ့ကာ လီးတန်ကြီးကို အရင်းမှကိုင်ပြီး သူမပါးစပ်ထဲသို့ သွင်းနိုင်သလောက် သွင်းလိုက်သည်။ ပြီးလျှင် နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာဖြင့်လီးချောင်းကြီးကို ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ကာစုပ်ပေးသည်အား.အားအီး….အူး…ညွှန့်မောင်၏ မျက်နှာကြီး ရှုံ့မဲ့သွားသည်။ ရွှေမိက လီး ကြီးကို အားရပါးရ စုပ်နေရုံမျှမက ပါးစပ်တွင်းတွင် သူမ၏လျှာ လေးဖြင့်လည်း လီးဒစ်ကြီးကို လှည့်ပတ်၍ ယက်နေသေးသည်။ ယောက်ျားရင့်မကြီးဖြစ် လျက် ညွှန့်မောင် ကိုယ်လုံးကြီး တ ဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။
အီး…အား…အူး…အိုး…အား….အား….ညွှန့်မောင် ဖင်ကြီးကြွတက်လာသည်။ ရွှေမိကသူမ၏ပါးစပ်ထဲမှလီးကြီးကိုထုတ်လိုက်ပြီး တံတွေးများဖြင့် ပြောင်လက်နေသောလီးကြီးကိုလက်ဖဝါးလေးဖြင့် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုပ်ကာခပ်သွက်သွက်ကြီးဂွင်းတိုက်ပစ်လိုက်သည်အိုး…အိုး…အား….အင်း..တခဏ အတွင်း လီးထိပ်အပေါက်လေးမှ သုတ်ရည်များမှာ ပြွတ်ကနဲ ပြွတ်ကနဲ ပန်း၍ထွက်လာခိုက် လက်မှလီးကို ဆက်၍ ခပ်သွက်သွက်ဂွင်းတိုက်ပေးရင်း ရွှေမိ မှာ ဘေးမှနေ၍ ညွှန့်မောင်ပေါ် မှောက်ချလိုက်တော့ ညွှန့်မောင်က သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို အတင်းဆွဲဖက်ကာ အငမ်းမရနမ်းလိုက်ပါလေတော့သည်။ အိပ်ယာထ ရေချိုးသော အလေ့အကျင့်ရှိသည့် ညွှန့်မောင်မှာ ရေချိုးခန်းရှိသော မီးဖိုချောင်ဖက်သို့ ဝင်၍အလာ ထူး ထူးဆန်းဆန်းမြင်ကွင်းတစ်ခုကို တွေ့ လိုက်ရသဖြင့် မီးဖိုချောင်ထဲသို့ အဝင်မှာပင် ညွှန့်မောင် ခြေစုံရပ်၍ ကြည့်နေမိသည်။ သူ ကြည့်နေသော အရာကတော့ အပေါ်က တီရှပ်အဖြူပွပွလေးကို ဝတ်ကာ အောက်ကထဘီအနက်ရောင်လေးကို တိုတိုလေး ဝတ်ပြီး နောက်တွင်စုစည်းထားသော ဆံပင်လေးကို အပေါ်သို့လှန်၍ ခေါက်တင်ပြီး ဆံညှပ်နှင့် ညှပ်ထားကာ သူ့ကိုကျောပေး ၍ ချက်ပြုတ်နေသော သန္တာလတ် ပင်ဖြစ်လေသည်။
မီးဖိုချောင်ထဲတွင် တစ်ခါဘူးမျှ သန္တာလတ် ချက်ပြုတ်နေသည်ကို မတွေ့ဖူးသည့်အပြင် ထဘီတိုတိုလေးနှင့် နောက်ကျောမှမြင်နေရသော သန္တာလတ်၏ အလှကလည်း ကျော့ရှင်းသပ်ရပ်၍ နေသည်။ ထဘီတိုတိုလေးဝတ်ထားသဖြင့် ခြေသလုံးသားလေးက ဝင်းနေသလို ဆံပင်ကိုအပေါ်သို့ လှန်၍ညှပ်ထား သဖြင့် ဂုတ်ပိုးသားလေးကလည်း ဝင်း၍နေသည်။ တဖန် ထဘီတိုတိုလေးကို တင်းတင်းလေးဆွဲဝတ်ထားသဖြင့် သူမ၏ ဝိုင်းစက်မို့ ဖောင်းနေသော တင်သားတွေက တစ်ရစ်ပေါ်လွင်၍နေသည်။ ဟေ့…ဘာကြည့်နေတာလဲ….လူကို မမြင်ဖူးတာကျနေတာဘဲ…ဟင်း…ဟင်း…အကိုညွှန့်မောင်ကြီး နော်….အခုတ လော တမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်….သူ့ကိုလှည့်မကြည့်ဘဲ သူရှိနေတာကို သိနေသည်။ မိန်းမတွေ အာရုံခံစားမှုက ယောက်ျားတွေထက် ပို၍ထက်သည် ဆိုသည်မှာ မှန်နေသည်။ ဒါ့အပြင် အခုတလောတမျိုးဖြစ်နေတာက သန္တာလတ်ဖြစ်သည်။ ဒါကို ညွှန့်မောင်ကပဲ တမျိုးဖြစ်နေ ပြန်သတဲ့။ တတ်လည်း တတ်နိုင်တဲ့ မိန်းမတွေဟု ညွှန့်မောင် တွေးလိုက်သည်။ ဗြုံးကနဲတော့ ညွှန့်မောင် ရှက်သွားပြီး မျက်နှာရဲသွားသည်။ ပြီးတော့မှ သူ့စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် လုပ်လိုက်ပြီး သန္တာလတ်အနီးသို့ လျှောက်၍လာကာ သူမ၏ နောက်နားတွင် ရပ်လိုက်သည်။
မမလေး ထမင်းဟင်းချက်တာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးလို့ပါ…နောက်ပြီး…ရွှေမိ ဒီမနက်ရွာပြန်သွားတယ်လေ…ကဲ ဆက်ပြောပါအုံး….နောက်ပြီး ဘာဖြစ် လဲ….မမလေးကို နောက်ကနေကြည့်ရတာ ခါတိုင်းထက် ပိုပြီး လှလာသလားလို့…”ညွှန့်မောင်တစ်ယောက် ရွတ်ပြီ။ဟင်း…ဟင်း…ဒီမှာ သူကြိုက်တဲ့ ကြက်သားနဲ့ ဘူးသီး ကာလသားချက် ချက်ထားပါတယ်နော်….ပြီးတော့ စားပွဲ ပေါ်မှာလည်း သူကြိုက်တဲ့ နန်းကြီးသုပ်နဲ့ ကော်ဖီအိုး အဆင်သင့်ရှိပါတယ်… ရေချိုးပြီး စားတော်မူပါနော်.ချောချောလှလှ မွှေးမွှေးပျံ့ပျံ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က အနားတွင်ရပ်လျက်က သူ့ကို ရင်းရင်းနှီးနှီးသူငယ်ချင်း ပမာ ပြောဆို ဆက်ဆံနေတော့ ညွှန့်မောင် ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးမိတာ အမှန်ပါ။ ကဲ….ရေသွားချိုးတော့လေ….ညွှန့်မောင် ကလေးတစ်ယောက်ပမာ ချက်ချင်းရေချိုးခန်းရှေ့ သို့ လှည့်ထွက်လာပြီး ရေချိုးခန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက် သည်အော်…အကို…ဒီနေ့ ဆိုင်သွားစရာရှိတယ်….ညီမ ဘာသာ ကားမောင်းသွားမယ်….ထမင်းချိုင့် လည်း ထည့်သွား မယ်….အကို အိမ်စောင့်….အိမ်မှာ စားလိုက် အိပ်လိုက်နဲ့ အားမွေးထား…မီးဖိုပေါ်မှ ဟင်းအိုးကိုချရင်း သန္တာလတ်က လှမ်း၍ပြောသည်။ “အကို” တဲ့ “ညီမ” တဲ့ ပေါ်တင်ကြီး အသုံးအနှုန်း တွေက ချက်ချင်းပြောင်းသွားသည်ဟိတ်.ဘာကြည့်နေတာလဲ….ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်တော့လေ….သန္တာလတ် က နောက်သလို ပြောင်သလိုဖြင့် လက်ညှိုးလေးထိုးကာ သူ့ကိုပြောလိုက်တော့ ညွှန့်မောင် ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ပြီး တံခါးပိတ်ကာ ရေချိုးနေလိုက်တော့သည်။
ညကျလျှင် တိုက်ကြီးတစ်လုံးထဲ၌ သူနှင့် သန္တာလတ်တို့ နှစ်ယောက်ထဲရှိနေ အိပ်နေရမည့်အရေးကိုတွေး၍ ညွှန့်မောင်မှာ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်၍နေသည်။ ညနေငါးနာရီလောက်တွင် သန္တာလတ် အိမ်သို့ ပြန်လာသည်။အကို တစ်ယောက်ထဲ ပျင်းနေပြီလား..ညီမလည်း စောစောပြန်လာချင်တာ ပေးလေ.သန္တာ လတ် လက်ထဲမှ ထမင်းချိုင့်နှင့် အထုတ်တွေကို လှမ်း၍ယူသည်။ သန္တာလတ်က ထမင်းချိုင့်ကိုပဲ လှမ်း၍ပေး သည်။ အော်…အကို…ကားက ဆီသိပ်မလိုက် ချင်ဘူး….အရင်လုပ်နေကျ ဝပ်ရှော့က ည(၉)နာရီထိ ဖွင့်တယ်မဟုတ်လား. …သွားလုပ်ပေးပါအုံး….ရော့ ကားသော့နဲ့ ပိုက်ဆံ….သန္တာလတ်က ညွှန့်မောင် ဆွဲယူထားသော လက်ထဲမှ ထမင်းချိုင့်ကို ပြန်၍ယူပြီး သူမ၏လက်ထဲမှ ကားသော့နှင့် ငွေ စက္ကူတစ်ထပ်ကို လှမ်းပေးသည်။ ညွှန့်မောင်က သန္တာလတ် လှမ်းပေးသည်တို့ကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး အိမ်ရှေ့တံခါးဆီသို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။ အော်…အကို ပြန်လာရင် အကို့ကို ပြစရာတစ်ခုရှိတယ်သိလား…ဘာ လဲ….အခုပြပါလား….ဟွန်း….သွားမှာသွားစမ်းပါ….ပြန်လာတော့ သိရမှာပေါ့….ညွှန့်မောင် လှည့်၍ထွက်ခဲ့သည်။ သန္တာလတ်ကတော့ အိမ်မှာ သူနှင့်နှစ် ယောက်ထဲရှိသည်ဟူသောအတွေးဖြင့် အ နေရဲ အပြောရဲဖြင့် ဖြစ်နေချေပြီ။ ဆက်၍ဘယ်လိုစခန်းသွားရမည်လဲဟူသော အတွေးဖြင့် ညွှန့်မောင်မှာ ရင်လေးစွာဖြင့် သက်ပြင်းမကြာခဏချနေရလေတော့သည်။
ညွှန့်မောင် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ည(၁၀)နာရီရှိပြီ။ အိမ်ရှေ့တံခါးတွင် သော့တန်းလန်းနှင့်ဖြစ်၍ ဖွင့်ပြီးဝင်ခဲ့သည်။ သန္တာလတ်၏ အခန်းထဲတွင် မီးလင်းနေ သေးသဖြင့် သန္တာလတ်မှာ အိပ်သေးပုံမရချေ။ သူ၏ အိပ်ခန်းထဲသို့ဝင်ပြီး ညွှန့်မောင် အဝတ်အစားတွေ လဲလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဆေးလိပ်သောက်ချင်လာ သဖြင့် စီးကရက်တစ်လိပ်မီးညှိပြီး အခန်းထဲတွင်ပင် သောက်နေလိုက်သည်။ တစ်အိမ်လုံးက တိတ်ဆိတ်၍နေသည်။ ဤအိမ်ထဲတွင် သူနှင့် သန္တာလတ်တို့ နှစ်ယောက်ထဲပါလား ဆိုသည့်အတွေးက ညွှန့်မောင်ကို ခြောက်လှန့်၍နေသည်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း သူတွေ့ကြုံခဲ့ရ၊ တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့် သန္တာလတ်နှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စတွေကိုလည်း ညွှန့်မောင် ပြန်၍တွေးမိနေသည်။ မတည်ငြိမ်သောစိတ်ကြောင့် သူသောက်နေသော စီးက ရက်မှာ အကုန်မြန်သွားသည်။ အစီခံသာ ကျန်တော့သည့် စီးကရက်တိုကို ဆေးလိပ်ခွက်ထဲသို့ ထိုးနစ်လိုက်သည်။ အကိုရေ…အကို…ညီမဆီလာပါအုံး….ဒီမှာ ပြစရာရှိလို့..လှမ်းခေါ် လိုက်သော သန္တာလတ်၏ အသံစာစာလေးကြောင့် ညွှန့်မောင်မှာ လေးပင်သောခြေလှမ်းများဖြင့် သူ၏ အိပ် ခန်းထဲမှထွက်၍ သန္တာလတ်၏ အိပ်ခန်းဆီသို့ လျှောက်၍လာသည်။ သူမ၏ အိပ်ခန်းမှာ တံခါးဖွင့်၍ထားသည်။ အိပ်ခန်းဝ ရောက်၍ လှမ်းဝင်လိုက်လျှင်ပင် ညွှန့်မောင်မှာ သင်းပျံ့သောမွှေးရနံ့များနှင့် အတူ သန္တာလတ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မိလိုက် သည်။
အဝါရောင်ဂါဝန်ပါးပါးလေးကို တထပ်တည်းဝတ်ထားသော သန္တာလတ်မှာ မီးရောင်ကို ကျောပေး၍ ရပ်နေသည်။ သူမ ၏ အတွင်းအင်္ဂါအစုံကထင်းလင်း လျက်လှပလွန်းသော ပန်းပုရုပ်လေးပမာ ညွှန့်မောင်ကို ဖမ်းစားလိုက်သည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသည်နှင့် ညွှန့်မောင်က သန္တာလတ်ကို ခြေစုံရပ်၍ ကြည့်နေ လိုက်မိသည်။ ရမက်တွေလွှမ်းနေသော မျက်လုံးအစုံဖြင့် သန္တာလတ်ကလည်း သူ့ကို တုန့်ပြန်၍ကြည့်နေသည်။ ခဏနေတော့မှ သန္တာလတ်က ပြုံးလိုက် သည်။ လာ အကို….ပြစရာရှိလို့…အသံကို တမင်တိုး၍ပြောကြောင်း သိသာလှသည်။ ညွှန့်မောင်မှာ အခန်းထဲသို့ဆက်၍ဝင်လာပြီး ကုတင်ခြေရင်းအ နား တွင် ရပ်နေသော သန္တာလတ်၏ ရှေ့တွင် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်လိုက်ပြန်သည်။ သူ့မျက်လုံးတွေကတော့ သန္တာလတ်ဆီမှ မခွာပေ။ ညွှန့်မောင် အနားသို့ ရောက်လာသည်နှင့် ကုတင်ခြေရင်းတွင် တင်ထားသော သူမ၏ စကပ်အညိုရောင်လေးကို ဆွဲ ယူကာ ညွှန့်မောင်ဖက်သို့ ပြုံး၍လှည့်လိုက်သည်။ အကို….ဒီမှာကြည့်စမ်း….ညွှန့်မောင် ကြည့်လိုက်သည်။ အညိုရောင်စကပ်လေး၏ ပိတ်သားလေးတွေမှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကော်နှင့်ကပ်ထားသ လို လေးငါး နေရာ၌ ကပ်၍နေသည်။ ညွှန့်မောင် မစဉ်းစားတတ်။ ကြောင်၍ ကြည့်နေသည်။ သူ့ကို အကဲခတ်သလို ကြည့်နေ သော သန္တာလတ်က ပြုံးလိုက်ပြီး သူ့ဘေး သို့ တိုးကပ်လိုက်သည်။ဘာအခုမှ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလဲ….ညွှန့်မောင်၏ လက်မောင်းကို လက်သီးဆုပ်လေးဖြင့်ထုရင်း အားမလိုအားမရ ပြောသည်။အကိုလေ….ဟိုတစ်နေ့ညက အခန်းဝမှာ လာပြီးသောင်းကျန်းသွားတာ….အဲဒါ အဲဒီစကပ်လေးနဲ့ ညီမသုတ်ထား တာဟွန်း ဘာမှန်းလဲမသိ ဘူး….ဝင်လာရင်ရရဲ့သားနဲ့နောက်ဆုံးစကားကိုတော့ သန္တာလတ်မှာ ညွှန့်မောင်၏ ရင်ခွင်ထဲသို့ တိုးဝင်ပြီးပြောသည်။
အကိုကတော့ တကယ်ပါပဲ….လက်ထဲက စကပ်လေးကို ကုတင်ခြေရင်းသို့ ပစ်တင်လိုက်ပြီး ညွှန့်မောင်ရင်ခွင်ထဲသို့ရောက်နေသော သူမ၏ ကိုယ် လုံးလေး အား ညွှန့်မောင်၏ ရှေ့ဖက်နှင့် ရင်ဘတ်အုံကြီးတို့ကို ပွတ်သပ်လှည့်ပတ်၍ပြောသည်။ ညွှန့်မောင် သတိလက်လွတ် ဖြစ်သွားသည်။ သန္တာလတ်၏ ကိုယ်လုံး လေးကို သိမ်းကြုံးဖက်လိုက်ပြီး သူမ၏မျက်နှာလေးကို ငုံ့၍နမ်းသည်။ သူ့ကို တစ် ကိုယ်လုံးထိတွေ့လျက်ရှိသည့် သန္တာလတ်၏ ခန္ဓာကိုယ်လုံးလေးက ဂါဝန်ပါးလေးတစ်ထပ်တည်းသာ ဝတ်ထားသဖြင့်ပကတိ အသားနှင့် ထိတွေ့နေသလို ထိတွေ့ခံစားနေရသည့်အပြင် သန္တာလတ်ကလည်း မျက်လုံးလေးများ မှိတ်ကာ မျက်နှာလေးကို မော့ပြီး အနမ်းခံသည်။ ပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းသူမ၏ နှုတ်ခမ်းလုံးလုံးလေးနှစ်ခုက ဟ၍ လာသည်။ ညွှန့်မောင်၏ နှုတ်ခမ်း အစုံ က သန္တာလတ်၏ နှုတ်ခမ်းအစုံကို ငုံ့၍ နမ်းစုပ်လိုက်သည်။ သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးမှာ ခြေဖျားလေးထောက်ကာမြင့်တက်လာရင်း လက်ကလေးနှစ်ဖက်က လည်း ညွှန့်မောင်ကိုအတင်းကြုံး၍ဖက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ချိုမြိန်သော သူမ၏ တုန့်ပြန် အနမ်းက ညွှန့်မောင်တစ်ယောက် သူမကို လွှတ်မပေးချင် အောင် ဖြစ်သွားရလေတော့သည်။ ညွှန့်မောင်၏ လက်တွေက သန္တာလတ်၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါ်တွင် ရွေ့လျားပြေးလွှား၍နေသည်။ လုံးလုံးကျစ်ကျစ် ကားကားစွင့်စွင့် တင်သားအစုံမှ သည် ပုခုံးလုံးလုံးလေးတွေအထိတိုင်အောင် စုန်ဆန်ရွေ့လျား၍နေသည်။ တဖြည်းဖြည်း သူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်များမှာ တရှိန်ရှိန်မြင့်တက်လာကြသည်။ နှုတ်ခမ်းချင်းခွာလိုက်တော့ သန္တာလတ်၏ မျက်နှာလေးက ညွှန့်မောင်၏ ရင်အုပ်ကျယ်ကြီး ဆီသို့ ပြေးကပ်လိုက် သည်။
မောလိုက်တာ အကိုရယ်…တအားကုန် ပြေးလိုက်ရသလိုပဲ..ညွှန့်မောင်၏ ကိုယ်လုံးကို ဖက်ထားသော သန္တာလတ်၏ လက်ကလေးတွေက ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ဖက် တွယ်၍ထားသည်။ကို. ဟင်….လာ ကိုရယ်….တို့နှစ်ယောက်ထဲ ရှိတာဟာ….သူ့ကိုယ်လုံးကြီးကို ဖက်ပြီး သန္တာလတ်က ကုတင်ဘေးသို့ ဆွဲခေါ်သွားသည်။ ကုတင်ဘေးရောက်သည်နှင့် ရပ်လိုက် သည်။ သန္တာလတ်က ညွှန့်မောင်၏ ပါးတစ်ဖက်ကို ဖိကပ်၍ နမ်းလိုက်ပြီး သူ့ကိုဖက်ထားသည့် လက်အစုံကို ဖယ်ရှား လိုက် သည်။ ပြီးလျှင် သူမက ကိုယ်ပေါ်ရှိ ဂါဝန်ပါးလေးကို လျှောကနဲ ချွတ်ချလိုက်သည်။ ကို….ညီမ လှလားဟင်…အင်း….ညွှန့်မောင်က ဝမ်းခေါင်း သံကြီးနှင့် ပြောရင်း ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားသော သန္တာလတ်၏ ကိုယ်လုံးလေးကို အငမ်းမ ရဆွဲဖက်လိုက်ပြန်သည်။ နေအုံးလေ ကိုရယ်….ကို့ အဝတ်တွေ ချွတ်ပေးအုံးမယ်…ညွှန့်မောင်တစ်ယောက် အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့သော စက်ရုပ်ပမာဖြစ်နေချေပြီ။ သူဝတ်ထားသော ရှပ်အင်္ကျီကြယ်သီး လေးတွေကို တ ထောက်ထောက်ဖြုတ်နေသော သန္တာလတ်၏ နို့အုံလေးနှစ်လုံးကို တို့ထိပွတ်သပ်ကစားနေသည်။ ညွှန့်မောင် အင်္ကျီကျွတ်သွားပြီ။ ခါးမှပုဆိုးကို ဖြည်ချ လိုက်ပြီး သန္တာလတ်က ငုံ့ကြည့်သည်။ တုတ်ခိုင်ရှည်လျားတောင့်တင်းလှသော ညွှန့်မောင်၏ လီးတန်ကြီးက သူမ၏ အသဲနှလုံးကို ထိုးဆွလိုက်သလို လီး ကြီးကို မြင်ပြီး ရင်ထဲတွင် ငြိမ့်ကနဲ ခံစားလိုက်ရ သည်။
လာ ကိုရယ်….ကုတင်ပေါ်သွားကြရအောင်လား…ညွှန့်မောင်၏ လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲခေါ်ရင်း သန္တာလတ်က ကုတင်ပေါ်သို့တက်ကာ လှဲချလိုက်တော့ ညွှန့် မောင်က လည်း သူမ၏ ဘေးတွင် လက်ထောက်၍ ထိုင်လိုက်ပြီး သူမ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်သည်။ဟင့်ကွယ်….အဲလိုကြီး ကြည့်နေတော့မှာ လား….ဆီးစပ်မှ အမွှေးမဲလေးတွေကို လက်ဖဝါးဖြင့် ပွတ်သပ်လိုက်ပြီးမှ ညွှန့်မောင်က သူမ၏ နို့နှစ်လုံးကိုငုံ့၍စို့သည်။သူ့လက်ကသူမ၏ ပေါင်တန် တစ်ဖက်ကိုစုန်ဆန်ပွတ်နေရင်း စောက်ဖုတ်လေးပေါ်ရောက်၍သွားသည်။ သန္တာလတ် တွန့်ကနဲ တစ်ချက်ဖြစ်သွားသည်။ မာမာလေးတင်းနေသော စောက် ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက စိုစွတ်၍နေသည်။ နှုတ်ခမ်းသားနှစ် ခုကို အသာလေးဖြဲကာ အစေ့လေးကို စမ်းလိုက်သည်။ အစေ့လေးက မာ၍တောင့် တောင့်လေးဖြစ်နေသည်။ သန္တာလတ် မျက်လုံးနှစ်လုံးမှိတ်ပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို မချင့်မရဲဖြင့် ကိုက်ထားသည်။ အဖုတ်လေးကို စမ်းလိုက်စဉ် နို့စို့ ပေးနေ သော အာရုံက ပျက်၍စုပ်အားက လျော့သွားသောကြောင့် သန္တာလတ်က ညွှန့်မောင်၏ ခေါင်းကို အသာလေးဖိ၍ ချပေး သည်။ ညွှန့်မောင်၏ အသက်ရှုသံက နှစ်ယောက်ထဲရှိသောအခန်းတွင်းဝယ် တဖြေးဖြေးကျယ်၍လာသည်။ စောက်ပတ်ကို နှိုက်၍ စောက်စေ့လေးကို ထိထိနေသဖြင့် စောက် ရည်တို့က တစိမ့်စိမ့်ထွက်လာကြသည်။
လိုးတော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လျက် ညွှန့်မောင်က သူမ၏ ရင်သားအစုံဆီမှ မျက်နှာကို ခွာလိုက်ကာ ကိုယ်လုံးကိုအကြွ သန္တာလတ်က သူ့ကိုယ်လုံးကြီးကို ဖက်၍ လှဲချလိုက်ပြီး အပေါ်စီးမှနေရာယူကာ ညွှန့်မောင်၏ နှုတ်ခမ်းတွေကို အာသာငမ်းငမ်းဖြင့် အတင်းဖိ၍ စုပ်သည်။ ညွှန့်မောင်က သူမ၏ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်ပြီး ကျောပြင်လေးကို သူ့လက်ဖဝါးကြီးနှင့် ပွတ်၍ပေးသည်။ သန္တာလတ်၏ လျှာ က ညွှန့်မောင်၏ ပါးစပ်တွင်းဝယ် မွှေနှောက်၍နေသည်။ နှုတ်ခမ်းအစုံကို ဖြုတ်ကာ မျက်နှာချင်းခွာလိုက်ပြီး ညွှန့်မောင်၏ မျက်နှာကို စိမ်းစိမ်းကြည့်ကာ သန္တာလတ်က သူ၏ကိုယ်လုံးကြီးပေါ် သို့ ခွ၍ တက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကိုကြွ၍ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ကာ ညွှန့်မောင်၏လီးတုတ်တုတ်ရှည်ရှည်ကြီးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ပြီး ဖင် သားအစုံကို ကြွကာ စောက်ပတ်ဝတွင် တေ့ပြီး တဖြေးဖြေးထိုင်ချသည်။ အ….အ…အင်း…တုတ်ခိုင်လွန်းသောလီးက ထစ်ထစ်နေသဖြင့် အံလေးကို ကြိတ်၍ အားဖြင့် ဖိဖိချသည်။ဗြစ်….ဗြစ်…အ…အင်း….ဗြစ်….ပြွတ်….ပလွတ်….အဟင်း…စောက်ခေါင်းထဲလီးဝင်သွားသည်နှင့် ထပ်၍ထွက်လာသော အရည်များကြောင့် လီးဝင်ဖြောင့်ကာ တဆုံးဝင်သွား သည်။ သန္တာလတ်က ညွှန့်မောင်၏ ရင်အုပ်ကြီးပေါ် လက်လေးနှစ်ဖက်ထောက်၍ ဖင်ကြီးကို ကြွကြွ ပြီး ဆောင့်သည်။ဗြွတ်…ဖွတ်….ဖွတ်….ပလွတ်….ဗြစ်….ဗြစ်….ပြွတ်.သန္တာလတ်က သူမ၏ ဖင်ကြီးကို ဆောင့်၍ ဆောင့်၍အချ ညွှန့်မောင်ကလည်း အောက်မှနေ၍ ပြန်ကော့၍ ဆောင့် ပေးသည်။
ပလွတ်….စွပ်….စွပ်….အင်း..ဟင်း…ကို…အင်း…ကောင်းလားဟင်….ကောင်းတယ် လတ်ရယ်….ဆောင့်….ဆောင့်….သန္တာလတ် တစ်ချက်ခြင်း ဆောင့် နေရာမှ ခပ်သွက်သွက်ကြီး ဆောင့်၍လာသည်။ စောက်ခေါင်းထဲမှ ထွက်လာသော အရည်ကြည်တွေက လီးအရင်းရှိ လမွှေးတွေပေါ်ကိုပင် ရွှဲ နစ်၍နေသည်။ ခဏအကြာခပ်သွက်သွက်ကြီး ဆောင့်နေရာမှ သန္တာလတ်၏ ဆောင့်ချက်တွေမှာ နှေး၍လာသည်။ပြွတ်..ပလွတ်….ဖွတ်…စွပ်….စွပ်…ဗြစ်… ပြွတ်…ကို…လုပ်ပေးအုံးကွာ….လတ်….မောပြီမောသံလေးနှင့် ပြောလိုက်ပြီး သန္တာလတ်က ဘေးသို့လှမ်းဆင်းလိုက်သည်။ စောက်ခေါင်းထဲမှ ပြွတ်ကနဲ ထွက်သွား သော လီးတန်ကြီးက အရည်များပေပွလျက် ကျန်ခဲ့သည်ကိုသန္တာလတ်က အာသာငမ်းငမ်းဖြင့် တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ထားလိုက်သည်။ ညွှန့်မောင် ထလိုက်ပြီး သူမ၏ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဒူးကွေး၍ရင်ဘတ်ပေါ်တွန်းတင်လိုက် ပြီး သူက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ စောက်ခေါင်း ဝသို့ လီးကိုတေ့ပြီး ဖိသွင်းသည်။
ပြွတ်….ကျွတ်….ကျွတ်….သန္တာလတ်၏ မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့သွားသည်။ သန္တာလတ်၏ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို လွှတ်ပေးလိုက်တော့ သူမက တစ်တီတူးလေး လို ခြေထောက်လေးတွေကို ညွှန့်မောင်တွန်းတင်ထားသည့်အတိုင်းထားလိုက်သည်။ ညွှန့်မောင်က သူမ၏ နို့ နှစ်လုံးကို ဘေးမှပတ်၍ ဆွဲဆွဲပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လျက်မှ ပုခက်လွှဲသလို ဆောင့်ဆောင့်လိုးသည်။ ပွတ်….ဖွတ်….ပြွတ်..ဖွတ်…ဗြစ်…စွပ်…စွပ်….အင်း…ဟင်း….ကို….အားနည်းနည်း ထည့်အုံး….ဟင်း…ဟင်း..ပြွတ်..ပြွတ်..ဒုတ်..ပြွတ်…ပြွတ်.အား…အား…ကောင်းလိုက်တာ….ကိုရယ်….နို့ကို နာနာကိုင်စမ်းပါ..အင်း…ဟုတ်ပြီ….ပြင်းပြင်း ဆောင့်…ဆောင့် ….အ….ပြွတ်….ဒုတ်…ဗြွတ်…ပြွတ်….စွတ်…ဖွတ်….ဟုတ်ပြီ…ဟုတ်ပြီ….။ သန္တာလတ်မှာ ကာမမီးတွေ တောက်လောင်ပြီး အားမလိုအားမ ရနှင့် နှုတ်ခမ်းလေးတွေတဆတ်ဆတ်တုန်နေသည့် ကြားမှမပီမသနှင့် ပြောသည်။ပြွတ်.စွတ်…ပြွတ်…အင်း…ကို..အင်း…ဟင်း…ဟင်း.လတ်…ပြီးချင်ပြီ… ဆောင့်..ဆောင့်.အား.အမလေးအား.အိုး….အီး….။ ညွှန့်မောင်က သူမ၏နို့နှစ်လုံးကို အတင်းညှစ်၍ ဆွဲကာ အားသွန်၍ဆောင့်ပစ်လိုက်သည်။ သန္တာလတ် မှာ စောက် ခေါင်းထဲက ရှီးကနဲသုတ်ရည်များပန်းထွက်ခိုက် ညွှန့်မောင်မှာလည်း(၁၀)ချက်မျှအံကြိတ်၍ ဆောင့်လိုက်ပြီးသုတ်ရည်များ ကို ပန်းထုတ်လိုက် လေတော့သည်။ အထဲတွင် ပြည့်လျှံသွားသော နှစ်ယောက်စလုံး၏ သုတ်ရည်များက စောက်ပတ်ဝကို လီး တုတ်တုတ်ကြီးကအပြည့်အကြပ်ပိတ်ဆို့ထား သည့်ကြားမှပင် အပြင်သို့ တစိမ့်စိမ့်စီးထွက်လာကြလေတော့သည်။ ပြီးပါပြီ
Categorized as အငျးဆကျ Tagged လရညျတှေ ဒလဟော သူ့ရဲ့လီးကို အသမေကျမော
သိပျ ခဈြတတျတဲ့ ကိုကို မို့လေ